ဒံယေလ A. Burgess, LMFT (ဖေဖော်ဝါရီ - မတ်လ, 2018) အားမထောက်ခံသောတောင်းဆိုမှုများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အသရေဖျက်မှုကိုဖြေရှင်းခြင်း - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ဒေါက်တာ Daniel A. Burgess မှ LMFT မှထောက်ခံမှုများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အသရေဖျက်မှု (Feb-March, 2018)
နိဒါန်း - ဘာ့ဂ်သည်သားကောင်ဖြစ်သူဟုစွပ်စွဲသော်လည်းသူသည်အဆက်အသွယ်အားလုံး (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွစ်တာ) ကိုစတင်ခဲ့ပြီးအသရေဖျက်မှုမှတ်ချက်များကိုတင်ခဲ့သည်။www.realyourbrainonporn.com။ "
ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၈ မတိုင်ခင်ကငါဒံယေလ Burgess LMFT အကြောင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး။ ရုတ်တရက် Mr. Burgess ဘယ်နေရာမှ@BurgessTherapyငါနှင့် YBOP ကိုတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများစွာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Burgess ၏ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုတွစ်တာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အများအပြားအောက်မှာ @YourBrainOnPorn tweets) နှင့် Facebook (YBOP ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာ၏တဦးတည်း Burgess ရဲ့ Facebook ကိုစာမကျြနှာ, ပြီးနောက် အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသ Facebook စာမျက်နှာ).
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင်ဒန်နီယယ်ဘာ့ဂ်ျသည်နစ်ကိုးလ်ပရာယပ်စ်အားကျွန်ုပ်၏ဆန့်ကျင်ရေး SLAPP ဝတ်စုံကိုခုခံကာကွယ်ရာတွင်အသုံးပြုရန်လိမ်လည်စာကိုရေးသားခဲ့သည်။ ငါတရားစွဲဆိုမှုကို Prause အဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးသူမ၏စာရေးဆရာများသည်သက်သေအထောက်အထားများလိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခံခဲ့ရသည် - Prause ၏တားမြစ်မိန့်သည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်အဖြစ်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့် SLAPP ၏ဆန့်ကျင်ပုဒ်မအားဖြင့်ရှေ့နေခများအကြွေးများစွာလိုအပ်သည်။ Burgess ၏စာတွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတွစ်တာရေးသားခဲ့ခြင်းကြောင့်သူသည်သူမသားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းကျွန်ုပ်အနေဖြင့်လက်ရှိစာမျက်နှာကိုသူ၏အသရေဖျက်မှု၊ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုများကိုဖော်ထုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Burgess သည်ကျွန်ုပ်နှင့် (အဆက်အသွယ်များစွာရှိသည့်လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်များကိုအသရေဖျက်မှု) နှင့် အစပြု၍ ဖန်တီးခဲ့သည့်အတွက်အလွန်ရယ်စရာကောင်းသည် www.realyourbrainonporn.comငါ၏အအမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ချိုးဖောက်၎င်း၏နေစဉ် တွစ်တာအကောင့် (@BrainOnPorn) သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏သားနှင့်သူမမိခင်အပါအ ၀ င်အခြားသူများကိုရှုတ်ချ။ Burgess ရဲ့စာ မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုထားသည်:
ငါ (ရာချီသောစာမျက်နှာများကိုအသရေဖျက်မှုစွပ်စွဲချက်များ) ထုတ်ဝေခဲ့သည် (Burgess သည်ဤစိတ်ကူးအသရေဖျက်မှုစွပ်စွဲချက်များ၏သုညဥပမာကိုပေးခဲ့သည်) ။ ငါသာဖော်ပြထားသောဤလက်ရှိစာမျက်နှာနှင့်အခြားမူလတန်းစာမျက်နှာနှစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့သည်
Burgess ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်ခြင်း / Twitter အကောင့် - ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုသောမည်သူမဆိုကိုအနိုင်ကျင့်ရန်နှင့်နီကိုလ်ပရပ်စ်နှင့်အလိုအလျောက်ပါ ၀ င်သောမဟာမိတ်များဖြစ်သည့် Daniel Burgess သည်တွစ်တာအကောင့်တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်သည်။.
Burgess ၏ smear ကင်ပိန်းတွင်ပါဝင်ခြင်း - Realyourbrainonporn (Daniel Burgess, Nicole Prause) သည်ဂယ်ရီ Wilson အားအသရေဖျက်မှု / နှောင့်ယှက်မှု - သူတို့က Internet Wayback Archive (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင်) ညစ်ညမ်းသော URL URL အတုများကို 'ရှာဖွေတွေ့ရှိ' သည်။).
YBOP မှာသူနဲ့သူ့ဇနီး & မိသားစုရဲ့ဓာတ်ပုံတွေတင်ခဲ့တယ်။ သူသည်သူမ၏အသရေဖျက်သော Facebook မှတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် avatar ကိုရည်ညွှန်းနေပုံရသည် - ကျွန်ုပ်သည်အောက်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ Facebook စာမျက်နှာတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
သူက "မျိုးစုံတရားဝင်ခြိမ်းခြောက်မှုများ။ " အဖြစ်မှန်မှာတော့ Burgess2သာရရှိခဲ့သည် အက္ခရာများကိုရပ်တန့်ပြီးရပ်တန့်ပါ - YBOP ကိုတရားမ ၀ င်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှစ်ခုစလုံးဖြစ်ပြီး၊
Daniel Burgess သည်သားကောင်လား။ မင်းကတရားသူကြီးပဲ။
YBOP ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာတွင် (ငါဒံယေလ Burgess နှင့်ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့သည့်နေရာ) တွင် Burgess of Screenshots ကမြောက်မြားစွာသောအသရေဖျက်မှုမှတ်ချက်များကိုတင်ခဲ့သည်။ Veမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် - ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာတွင်ဖြစ်သည် Burgess ရဲ့သရေဖျက်မှုမှတ်ချက်များ ရှိနေတုန်းပဲ။ ကသူကသူ့မိသားစုကိုအပြင်ကထွက်ခိုင်းတာဟာရယ်စရာကောင်းတယ်။
ငါ Burgess အားပေးခဲ့သောစာမျက်နှာသို့လင့်ခ် (သူသည်ဤ link ကိုမပြန်ပါ) ဂယ်လီ Wilson နှင့်အခြားသူများကိုနီကိုး Prause ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုနှင့်အသရေဖျက်မှု။ မှတ်စု: Burgess ဖြစ်ပါတယ် ယခု ကျွန်ုပ်၏ Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်အားနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းသည်အထက်ပါသူ၏ဖန်သားပြင်သည်“ doxing” ဖြစ်သည်။ ဒါက DARVO ရဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာပါပဲ။ Dအစဉ်အဆက်, ထို့နောက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အလွဲသုံးစားမှု eny Aအကြမ်းဖက်သူအားတာ ၀ န်ယူရန်ကြိုးစားခြင်းအတွက်သားကောင်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ထို့နောက်မုသားနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအရှင်, ဒီအခြေအနေမှာအမှန်တကယ်သားကောင်သည်ဆိုကြသည် Reversing Victim နှင့် Offender ။
စကားမစပ်, 'doxing' ငါပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်ပို့စ်တင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သူ၏ထင်မြင်ချက်များသည်အများပြည်သူနှင့် YBOP Facebook စာမျက်နှာတွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ငြားလည်း, တွစ်တာအကောင့် Burgess ၏ယခုဖွင့်လှစ်ထားသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်သည့်ဆိုက် (@BrainOnPorn) နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် ငါ့သားနဲ့သူ့အမေကိုအကြိမ်များစွာမုန်းတီးခဲ့တယ် ၎င်းတို့၏အမည်များ၊ ပုဂ္ဂလိကဓာတ်ပုံများ၊ လိပ်စာများ၊ အလုပ်နေရာများနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပါအ ၀ င် (နောက်ဆက်တွဲ tweets ၈၀ ခန့်) ။
YBOP Twitter Threads တွင်
အထက်ပါမှားယွင်းသောဖော်ပြချက်များနှင့်အသရေဖျက်မှုများကြောင့်မကြာမီတွင် Burgess သည်အဆိပ်များနှင့်မထောက်ပံ့သော drivel တစည်းကိုထုတ်ယူရန်သူ၏နည်းနည်းမျှသော Twitter account သို့သွားခဲ့သည်။ ငါ့ကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့စာသားကိုးခု (Burgess ကတည်းကဒီ tweets ဖျက်ပစ်နှင့် Twitter အကောင့်၏အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည် @MyAscentTherapy):
ယင်းတွင် "အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသFacebook Group
Burgess သည် YBOP ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာနှင့်တွစ်တာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်မကြာမီအသင်းဝင် ၆၀၀၀ ကိုသူမြင်တွေ့ခဲ့သည်။အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသFacebook အဖွဲ့ (YBOP နှင့်သုတေသနအကြောင်းသူမထောက်ခံသည့်ပြောဆိုမှုများကိုနောက်အခန်းတွင်ဖော်ပြထားသည်) ။ ကုထုံးဆရာ Staci Sprout နှင့် Forest Benedict တို့မှ Burgess သို့ ၁၈ ချက်ပြန်ကြားချက်မှာကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည် Burgess ရဲ့အသရေဖျက် tirade။ Burgess ကကျွန်ုပ်ကိုရှုတ်ချသည့် MFT ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှမှတ်ချက်များကိုဥပမာတစ်ခုပေးခဲ့သည်။
ဒါဟာ Burgess က "ချွတ်ကန်ခဲ့ပုံပေါ်အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသ"Facebook ကအုပ်စု ချည်ထဲမှာအခြားသူတွေကိုအသရေဖျက်ခြင်း, သေးသူသည်ယခုသူ၏နတ်သမီးပုံပြင်ပျံ့နှံ့နေသည် I နှင့်အဆက်အသွယ်စတင်ခဲ့သည် သူ့ကို။ ငါအစပြုခဲ့တဲ့ 'အဆက်အသွယ်' လို့ခေါ်တဲ့တစ်ခုတည်းသောသူက Burgess ကို Cease & Desist ပေးစာပဲ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုသည်.
Burgess ငါ့ကို Defame & နှောင့်ယှက်ရန်အတု Twitter အကောင့်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်
ဇွန်လ 14, 2019 တွင်ငါ posted အောက်ပါ Twitter ကိုချည် မှနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုတုံ့ပြန် “ RealYourBrainOnPorn” Twitter အကောင့်။ (အမျှ ဒီနေရာမှာရှင်းပြခဲ့၊ RealYBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များသည်တရားမ ၀ င်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကျူးကျော်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်းများပြုလုပ်နေသည်။ ) ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြုံနေသော“ Ron Swanson” အကောင့်သည်ကျွန်ုပ်၏ချည်ထဲသို့ ၀ င်ပြီးဥပဒေနောက်ခံရှိသည်ဟု ဆို၍ ဥပဒေရေးရာအကူအညီများပေးခဲ့သည်။
“ Ron Swanson” တွစ်တာအကောင့်သည်အတုအယောင်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ကအမြန်စာမေးပွဲ “ Ron Swanson's” တွစ်တာ ဒါဟာအတုဖြစ်ခဲ့သည်ဖြစ်ကောင်းငါးဖမ်းလေ့လာရေးခရီးပို့ချထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ငါ "Swanson" ဟာ Burgess ဖြစ်တယ်လို့သံသယရှိခဲ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၃ နှစ်အတွင်းမှာတွစ်တာ ၂၀ မျှသာထဲကတစ်ခုကတော့ Burgess ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့သူ့ဇနီးသည် CrossFit ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာပါ ၀ င်နေတယ် (Burgess မှာ Facebook စာမျက်နှာရှိတယ်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းအားကစားဒန်)။ “ Ron Swanson” ကတွစ်တာတွင်
link ကဒီ NugentTherapy Instagram post (စာမျက်နှာကိုသွားသည်) ကတည်းကလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပျောက်ကွယ်ခဲ့သည်) ။ Nugent Therapy လူမှုမီဒီယာကို Burgess မှစီမံခန့်ခွဲပုံရသည်။
Burgess နှင့်သူ၏ဇနီးတို့သည် CrossFit တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမှာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ။ သူကတောင်ဖန်တီးခဲ့တယ် ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို chronicling Facebook စာမျက်နှာ (update ကို - သက်သေအထောက်အထားများကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်, Burgess စာမျက်နှာဖျက်ပစ်) ။ မှတ်ချက်။ Burgess ကငါ့ကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းစေခြင်း၊ လှောင်ပြောင်ခြင်း၊ ဥပဒေရှေ့နေ Giampietro မှတစ်ဆင့်ခြိမ်းခြောက်သောစာများပေးပို့ခြင်း၊ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောတရားစွဲဆိုမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သူနှင့်သူ၏ alias ၏အွန်လိုင်းအပြုအမူများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခံရသည်။
“ Ron Swanson” ၏လျှို့ဝှက်နက်နဲရာဖြေရှင်းချက်ကို
Burgess သည်သူ၏သုံးစွဲဖို့ဆက်ပြောသည် @RonSwansonTime alias ။ RealYBOP သည်မိနစ်ပိုင်းခန့်တွင် SoCal ACLU စာကိုရေးခဲ့သည် ဤစာမျက်နှာတွင်) @RonSwansonTime အားလုံးမှာလေးကြိမ် Tweet လုပ်ခဲ့ @YourBrainOnPorn။ အဆိုပါ @RonSwansonTime သူ၏ဇွန်လ ၁၅ ရက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော tweets နှစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်အား Sage legal advice အတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ငါ့ကိုလှည့်စားရန်ကြိုးစားနေချိန် မှစ၍ account သည်မည်သည့်အရာကမျှရေးသားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ တွစ်တာလေးခု -
ဘာ့ဂ်သည်သူသည်“ သူ” ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖုံးကွယ်ရန်မကြိုးစားတော့ပါ@RonSwansonTime"။
သြဂုတ်လ 21, 2019, တွင် Burgess အမည် (@RonSwansonTime (လိမ်လည်လှည် porn URLs များကိုတစ်ဦးစခရင်ပုံ Tweet လုပ်ခဲ့တည်ရှိဘယ်တော့မှကြောင်းစာမျက်နှာများ) ။ ဒါဟာအောက်မှာညျထငျရှား ငါ့ကိုအကြောင်းပြောနေတာ NerdyKinkyCommie ။ Nerdy ပရော်ဖက်ရှင်နယ် trolls နှင့် Prause-ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ ငါ့ကိုနှောင့်ယှက်မှုအတွက် (၇) ရက်ကြာတွစ်တာရပ်ဆိုင်းမှုကိုသူရခဲ့သည် ဒီနေရာမှာရှင်းပြခဲ့). ထို့နောက် RonSwansonTime ကို Nicole Prause နှင့် David Ley တို့ကပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ဤတွစ်တာများသည်ကျွန်ုပ် (သို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆို) ၏ URL အတုများတည်ရှိသည်ကိုတစ်ခါမှမကြားဖူးပါ YBOP ၏ Wayback စက်မော်ကွန်းတိုက်ရှိမရှိသောစာမျက်နှာများ) ။ သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့၏အဖြစ်အပျက်များ
NerdyKinkyCommie ငါ့ကို trolls (ထို 100th အချိန်သို့မဟုတ်ဒါများအတွက်)
@RonSwansonTime ချက်ချင်း WayBack Machine ကိုမှ screenshots များနှင့်လင့်များနှင့်တကွ, ချည်ပေါ်2tweets post
နီကိုးလ် Prause ချက်ချင်း အဆိုပါချည်ပူးပေါင်းမည်
ဒါဝိဒ်သည် Ley သည်သူ၏နှစ်ခုဆင့်ဖြည့်စွက်
ငါထို့နောက် outed @RonSwansonTime သည် Burgess alias ဖြစ်နိုင်သည် ရလဒ်ကတော့Ron ကသူ၏တွစ်တာအကောင့်ကို“ ကာကွယ်ထား” ထားသည် Ron Swanson တကယ် Burgess ဖြစ်ပါသည်).
အကျဉ်းချုပ်အနေဖြင့်၊ Burgess သည်ယခုသူနှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်စတင်ဆက်သွယ်သည့်ဇာတ်လမ်းများကိုဖန်တီးနေသည်။ သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, Burgess လိမ်သည်။ သူဟာပြစ်မှုကျူးလွန်သူမဟုတ်ပါ။
၁၉၀၉၊ သြဂုတ်လတွင် Burgess ၏မှတ်ချက်နှင့်လူမှုမီဒီယာအကောင့်အချို့ပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊ တွစ်တာအကောင့်ဟုယူဆရသော (ပုဂ္ဂလိကသွားလေ၏@RonSwansonTime) ။ ဤသည်မှာပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်:
ဥပဒေရေးရာလုပ်ရပ်များက Daniel Burgess သည်လက်ရှိပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည် စစ်မှန်သောyourbrainonporn.com URL (ပိုမိုကြည့်ရှုရန် - Porn စွဲ Deniers (www.realyourbrainonporn.com) ကလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ရန်လိုအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု
the realyourbrainonporn.com တွစ်တာအကောင့် (@BrainOnPorn) တစ်ဦးအပေါ်သွားလေ၏ 4-နေ့, 110 + ဂယ်ရီ Wilson ကပစ်မှတ်ထားရေဖျက်သောင်းကျန်း tweetအဆိုပါ realyourbrainonporn.com အီးမေးလ်အကောင့်အတူတူအသေရေဖျက်အမှိုက်သရိုက်တွေနဲ့ Wilson ကယ့်သူငယ်ချင်းများကိုနှောင့်ယှက်နေစဉ်။ အသေးစိတ်အတွက်တွေ့မြင်:
ကျယ်ပြန့်ဆောင်းပါး: Realyourbrainonporn ဂယ်ရီ Wilson က၏ (ဒံယေလ Burgess) သရေဖျက်မှု / နှောင့်ယှက်: အင်တာနက်ကို Wayback မော်ကွန်းတိုက် (သြဂုတ်လ, 2019) တွင် "တွေ့ရှိခဲ့" အတုညစ်ညမ်း URLs များကို
အဆိုပါက ဦး ဆောင်အန္တရာယ်ရှိဇာတ်ကောင် - impugning မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအပြင် "စစ်မှန်သော Brain On Porn” တွစ်တာအကောင့် (အရာထင်ဟပ် အမှားကိုအမှန်၏နီကိုးလ် Prause ရဲ့နွှယ်နေတယ်လို့), Twitter အကောင့် (@BrainOnPorn) အနည်းဆုံးပြစ်မှု ၃ ခုကျူးလွန်သည်ဟုကျွန်ုပ်အားအတိအလင်းစွပ်စွဲခဲ့သည်
လူသိရှင်ကြားကိုယ်ကျင့်တရား turpitude နှင့်ပြစ်မှုလူတွေကိုစွပ်စွဲအရေးယူမှုဖြစ်ပါက။ တကယ်တော့အထက်ပါသရေဖျက်မှုထုတ်ပြန်ချက်များ "ယူဆနေကြသည်အသရေဖျက်မှု se နှုန်း” - ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်စီးပွားဖြစ်ပျက်စီးမှုကိုဖော်ပြရန်မလိုအပ်ကြောင်းဆိုလိုသည် (ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်မှရရှိသောငွေများသည်ပရဟိတလုပ်ငန်းသို့သွားသည်) ။ ဥပဒေရေးရာအကြံပေးကယုံကြည်သည် ဒန်နီယယ်ဘာ့ဂ်ျသည်တရားဝင်တရားခံပါတီဖြစ်သည်။ (အခြားသူများကို“ Real Brain On Porn” တွစ်တာအကောင့်ဖြင့်ရှုတ်ချထားသည်).
ကြီးမားတဲ့ wow သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သောပရာ့စ်နှင့်ဒန်နီယယ်ဘာ့ဂ်ျတို့၏တရားဝင်အကြံပေးသည်ကျွန်ုပ်နှင့်တိုက်လှန်သည် ဝိန်းခ Giampietro ဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်ခုခံကာကွယ်သည့်အဓိကရှေ့နေတစ် ဦး ဖြစ်သည် backpage.com။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရကလူကုန်ကူးမှုနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းများကိုတမင်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့် backpage ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ (ဒီကိုကြည့်ပါ USA Today ဆောင်းပါး: Backpage တည်ထောင်သူများထံမှလိင်လူကုန်ကူးမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ 93-count စွဲချက်တင်) ။ ထိုစွဲချက်တင်မှုက Backpage ပိုင်ရှင်များကိုအခြားသူများနှင့်အတူဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ပြည့်တန်ဆာပြစ်မှုများကိုသိသိသာသာလွယ်ကူချောမွေ့စေမည်ဟုကြံစည်ခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များကလူကုန်ကူးခံရသူအချို့သည်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများပါ ၀ င်သည်ဟုဆိုကြသည်။ Giampietro ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါ။ https://dockets.justia.com/docket/illinois/ilndce/1:2017cv05081/341956. ဖြစ်ရပ်များ၏ထူးဆန်းအလှည့်၌, backpage.com ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအရီဇိုးနားမှသိမ်းယူခဲ့သည်။ နှင့် ဝိန်းခ Giampietro LLC $ 100,000 လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးအဖြစ်စာရင်းဝင်.
၁) နွေရာသီ၊ မေလ 8, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်, MD တစ်ဦးအသရေဖျက်မှုတင်သွင်း se နှုန်း ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ဆန့်ကျင်။ ဇူလိုင်လ 24, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်ကသူ့အသရေဖျက်မှုတိုင်ကြားချက်ပြင်ဆင် (၁) တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးသူဘုတ်အဖွဲ့မှတိုင်ကြားချက်၊ (၂) ဒေါက်တာဟီလ်တန်သည်သူ၏အထောက်အထားများကိုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်းနှင့် (၃) အလားတူအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည့်အခြား ၉ ခုမှဝေဖန်မှုများ။ယောဟနျသ Adler, MD, ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Stacy အညွှန့်, LICSW, Linda Hatch, Ph.D, Bradley အစိမ်းရောင်, Ph.D, Stefanie Carnes, Ph.D, Geoff Goodman, Ph.D, Laila Haddad.)
၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်၊ အောက်တိုဘာလ 23, 2019 Alexander Rhodes (တည်ထောင်သူ reddit / nofap နှင့် NoFap.com) သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည် နီကိုးလ် R ကိုချီးမွမ်း နှင့် Liberos LLC။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ဒီမှာတရားရုံးစာရင်း။ Rhodes မှတင်သွင်းသောမူလတန်းတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ NoFap တည်ထောင်သူ Alexander Rhodes Nicole Prause / Liberos အားတရားစွဲဆိုမှု.
၃) နိုဝင်ဘာ၊ နောက်ဆုံးတွင်အမှတ်စဉ်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲသူ၊ အသရေဖျက်မှု၊ “ NoFap မှ Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုလိုက်သည်” ၏ Megan Fox ကဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် PJ မီဒီယာ နှင့် “ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်လာသည်”၏ဒိုင်ယာနာ Davison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် The Post Millennial။ Davison သည် Prause ၏မတူကွဲပြားသောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဤ6မိနစ်ဗီဒီယိုကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Porn သည်စွဲစွဲလမ်းမှုလော။.
4) ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ အဲလက်စ်ရိုဒ်စ်တင်သွင်းခဲ့သည် Prause ဆန့်ကျင်ပြင်ဆင်ချက်တိုင်ကြားချက် RealYBOP ရဲ့ twitter အကောင့်ကိုလည်းအမည်ပေးထားတယ်။@BrainOnPorn) အသရေဖျက်မှုအတွက်ပါဝငျအဖြစ်။ ဇာတ်လမ်းနှင့်တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ - NoFap တည်ထောင်သူ Alexander Rhodes Nicole Prause / Liberos အားတရားစွဲဆိုမှု။ RealYBOP ၏လိမ်လည်မှု၊ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု၊ The @BrainOnPorn Twitter ကိုအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုဖြင့်ဖော်ပြ PDF ၏တရား ၀ င်စာရွက်စာတမ်းများ @BrainOnPorn
တရားဝင်တာ ၀ န်ဘယ်သူလဲ RealYBOP“ ကျွမ်းကျင်သူများ”၊ or Prauseနောက်ကွယ်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်၏ URL ကိုမှတ်ပုံတင်ထားသော Daniel Burgess သို့မဟုတ်?
မတ်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်အဲလက်စ်ရော့ဒ်သည် Prause's ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည် ပယ်ချဖို့ရွေ့လျားမှု။ သူ၏တရားရုံးတွင်အသစ်သောအဖြစ်အပျက်များနှင့်သက်သေအထောက်အထားများ၊ ထပ်မံချီးကျူးထောပနာခံရသူများ၊ ပိုမိုနောက်ခံ / နောက်ခံများပါ ၀ င်သည်။ အတိုချုပ် - ၂၆ မျက်နှာ, ကြေငြာချက် - ၆၄ မျက်နှာ, ပြပွဲ - စာမျက်နှာ 57။ @BrainOnPorn twitter အကောင့်ကိုထပ်မံအမည်ပေးထားသည်။ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာဤအဖြစ်အပျက်သစ်များကိုဖော်ပြသည့်ကောက်နုတ်ချက်များ။
အဖြစ်မှန်တွင် @BrainOnPorn သည် Rhodes နှင့် Nofap ကိုပစ်မှတ်ထားသည့်နောက်ထပ်ရာနှင့်ချီသော tweets များတင်ခဲ့သည်။ Nicole Prause၊ David Ley & @ BrainOnPorn ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်း NoFap မှ Alexander Rhodes အားအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းတို့၏သမိုင်း.
စဉ် ဒံယလေသ Burgess လူသိများသည် RealYBOP URL (www.RealYourBrainOnPorn.com), အရှိဆုံးယုံကြည်သက်သေအထောက်အထားဆီသို့ ဦး တည် Nicole Prause သည် RealYBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်တွစ်တာအကောင့်ကို ဖန်တီး၍ လည်ပတ်သည်.
RealYBOP သည်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုသောသူတို့ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုကိုအမြဲတစေပြုလုပ်သည် (ပထမနှစ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောတွစ်တာ ၈၀၀ ကျော်) ။ ဘယ်သူ့အတွက်တရားဝင်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိချင်တယ် @BrainOnPorn's ကိုအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်? အဲဒါပဲ နီကိုးလ် Prauseသို့မဟုတ်နောက်ကွယ်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံးလော။ ဒါမှမဟုတ်အားလုံးနိုင်ဘူး RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက" တရားဝင်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအရတာဝန်ရှိပါသလား
ဤမေးခွန်းသည်အသေးအဖွဲမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ Prause နှင့် RealYBOP တွစ်တာသည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုနှင့်ပတ်သက်နေသည်။Donald ဟီလ်တန်, MD & Nofap တည်ထောင်သူ အလက်ဇန်းဒါး Rhodes), တစ်ဦး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုကိစ္စနှင့် ကိစ္စတွင်ကီထိုင်တံဆိပ်။ စင်စစ်အားဖြင့် RealYBOP တွစ်တာအတော်များများသည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုနှင့်အခြား Prause နှင့် RealYBOP တွစ်တာ၏သားကောင်များမှတင်ပြသောကျမ်းကျိန်လွှာများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ကျမ်းကျိန်လွှာ # 1, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 2, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 3, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 4, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 5, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 6, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 7, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 8, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 9, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 10, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 11, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 12, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 13, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 14, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 15, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 16).
၅) နောက်ဆုံးသတင်းများ (သြဂုတ်လ၊ ၂၀၂၀): ၂၀၂၀၊ မတ်လမှာ၊ Prause ကလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့သူမရဲ့ပုံမှန်လိမ်လည်မှု (ငါ့ကိုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲတယ်ဆိုပြီးမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲချက်) တွေသုံးပြီးငါ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အခြေအမြစ်မဲ့ယာယီတားမြစ်မိန့် (TRO) ကိုရှာခဲ့တယ်။ တားမြစ်ထားသည့်အမိန့်တောင်းခံရန် Prause ၏တောင်းဆိုချက်အရသူမကသူမကို YBOP နှင့် Twitter တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။မုသားသက်သေခံမှုသည် Prause တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ) ။ တရားမ ၀ င်စနစ် (TRO) ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းဖြင့်ငါ့ကိုနှုတ်ဆိတ်။ နှောင့်ယှက်ရန် Prause ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိပြည်နယ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်ကိုတားမြစ်သည့်အမိန့်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။။ အနှစ်သာရအားဖြင့်တရားရုံးက Prause ကကျွန်ုပ်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနှိပ်စက်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုလျှော့ချရန်တားမြစ်မိန့်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်သည် Prause အားကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေကြေးပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
YBOP ၏မတ်လ၊ ၂၀၁၈ ဆောင်းပါးတွင် Daniel Burgess ၏အသရေဖျက်မှုကိုဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောအယူအဆများကိုဖော်ပြထားသည်:
ဒန်နီယယ်ဘာဂေ့စ်ကကျွန်တော့်ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့သည်။ သူသည်နှစ်ပေါင်းများစွာမောင်းနှင်ခဲ့သောနီကိုးလ်ပရာ့စ်၏ပုံမှန်လိမ်လည်မှုနှင့်သားကောင်ဖြစ်ခြင်း၏အယောင်ဆောင်မှုများကိုတွန်းလှန်ခဲ့သည်။ မှတ်တမ်းတင်ဖြစ်ရပ်များရာပေါင်းများစွာအဘို့ဤကျယ်ပြန့်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ပါ
နီကိုးလ် Prause ဆန့်ကျင် Donald ဟီလ်တန်အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှု: Download လုပ်နိုင် PDF ကိုဟီလ်တန်တရားစွဲဆိုမှုများရဲ့ပြပွဲနှင့်9သည်အခြား Prause သားကောင်များတိုင်တည်လျက်ကျိန်ဆိုကျမ်းကျိန်လွှာ
ပုံမှန်အားဖြင့် YBOP သည်ထပ်ခါတလဲလဲအသရေဖျက်မှုစီးဆင်းမှုနှင့်လူမှုမီဒီယာတွင်တင်ထားသောကြော်ငြာ hominem claptrap နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ Burgess က YBOP ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာနှင့်တွစ်တာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုရှုတ်ချပြီးမကြာမီတွင်သူသည်“ သူမအပေါ်ထားရှိသည့်အရာ”အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသBurgess 6,000 လိုင်စင်ရကုသနှင့် YBOP Facebook ကပရိသတ်ကိုရှေ့တော်၌မိမိအသရေဖျက်မှုပြသလို့ပဲ။ "ငါကလိုအပ်သောသည်သူ၏အန္တရာယ်ရှိတဲ့မှတ်ချက် (နှင့်ညစ်ညမ်းသုတေသန၏သဘောအရဆိုလျှင်အကြောင်းကိုသည်မိမိကလက်ခံတောင်းဆိုမှုများ) debunk မှခံစားခဲ့ရ
Stacy ညှနျ့နှင့်သစ်တောဘင်နီဒစ်၏ဖြစ်နေဆဲသောသူအပေါင်းတို့သည်များမှာကုသခွငျးအားဖွငျ့ Burgess ဖို့တသောင်းရှစ်ပြန်စာများ Burgess ရဲ့အသရေဖျက် tirade။ ဒါဟာ Burgess က "ချွတ်ကန်ခဲ့ပုံပေါ်အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသ"Facebook ကအုပ်စု ဒီချည်၌ငါ့ကို defaming.
လက်ရှိစာမျက်နှာတွင်အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနှင့်မိသားစုကုထုံးဆိုင်ရာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်တင်ထားသောမှတ်ချက်များစွာပါရှိသည် Daniel Burgess Facebook အကောင့်, ငါ့တုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်။ Burgess မှတ်ချက်များသည်မွန်းတည့်နှင့်အနီရောင်ဖြစ်နေသည်။
မတ်လ၊ ၂၀၁၈၊ ဒယ်နီယယ်ဘာ့ဂ်စ်မှားယွင်းသောအရာများ၊ ဂယ်ရီ Wilson ၏တုံ့ပြန်ချက်များဖြင့်လိုက်နာခဲ့သည်
ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်အစစ်အမှန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: မုသားနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံ ကြော်ငြာ hominem လူများတို့သည်လင့်များကို click နဲ့ Burgess ချေပနိုင်ဘူးသမျှပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဒါကြောင့်။ သူတို့ကကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည် Prause နှင့် Ley နှင့်၎င်းတို့၏ခရိုနီပေမယ့်သုတေသနပြုသို့မဟုတ်စွဲလမ်း၏ neurobiology ၏လက်ရှိပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာမျှမသိတယ်။
မှတ်ချက် သို့ အပေါ်ဒံယလေက Burgess အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသ (YBOP မှ link တစ်ခုပါရှိသောအရာ) ကို Facebook စာမျက်နှာ:
၎င်းကို ၁၉၉၈ တွင်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်: https://www.yourbrainonporn.com/research-articles-and-abstracts
Burgess သည်သူ၏ diatribe စတင်ခဲ့သည်:
ဒံယလေသ Burgess: သင့်ရဲ့ပြန်ကြားချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒေါက်တာကလိန်းဆောင်းပါးသည်ယခင်ကထက်ယခု ပို၍ သက်ဆိုင်သည်။ သူသည်လိင်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာထိပ်တန်းသုတေသီများနှင့်အတူလေ့ကျင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့ YBOP site ကိုမှငါ့ကိုချိတ်ဆက်အဖြစ်။ ဂယ်ရီသည်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝနားမလည်နိုင်ရုံမကပါ။ သူကထပ်ခါတလဲလဲလိမ်ပြောပြီးသူကိုယ်တိုင်၊ သူ၏“ အထောက်အထားများ” နှင့်အမျိုးသမီးများအားလိုင်းပေါ်မှမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဂယ်ရီဟာလိမ်လည်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး CBC ကသူ့ကိုလိမ်လည်မှုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူသည်ကိုကင်းကဲ့သို့စွဲလမ်းမှုကိုမည်သို့သက်သေပြနိုင်ကြောင်းသူ၏ site ပေါ်တွင်ရာနှင့်ချီသောလေ့လာမှုများကိုစာရင်းပြုစုခဲ့သည်။ သို့သော်သုတေသနပြုမှုမဟုတ်ပါကဤသို့သောအရာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဒီလူကလှည့်စားတတ်တယ် အကောင်းဆုံးမှာဝါဒဖြန့်ခြင်း၊ အလားအလာကောင်းသည့်အမှုအခင်းဖြစ်သည့် dsm ပြင်ပရှိလူများကိုရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်သည်။
Gary Wilson ရဲ့တုံ့ပြန်မှု:
၁)“ သူကိုယ်တိုင်ဂယ်ရီအထွေထွေ” - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ်ညာတာ၊ Burgess သည်ပစ္စည်းများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် ad hominem နှင့် untruths များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် Ley & Prause မှသူ၏စကားပြောနေသည့်အချက်များကိုရယူနေသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ပါမောက္ခလို့ခေါ်တယ်၊ သူမဆက်သွယ်ဖူးတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကပုံနှိပ်ပြီးပို့ပေးတယ်၊ သူကငါ့ကိုပါမောက္ခလို့မှားယွင်းခေါ်ဝေါ်သူတွေကတော့သူမကမှန်မှန်ပြောတယ်။ ဤနေရာတွင်စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ: Prause မဟုတ်မမှန် Wilson ကမိမိအအထောက်အထားများအတုမူကြောင်းကိုမလုပ်ပဲ။ (အခြားသူများကကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပညာရှင်၊ အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်စသည်ဖြင့်မှားယွင်းစွာခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ထိုအရာသည်ကျွန်ုပ်မထိန်းချုပ်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ ) ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ဖော်ပြချက်သည်အမြဲတမ်းရှိပြီးပြောင်းလဲမှုမရှိသေးပါ - https://www.yourbrainonporn.com/about-us
၂။“ အမျိုးသမီးများအင်တာနက်ပေါ်တွင်အရက်သောက်ခြင်း”: ငါအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းအမျိုးသမီးများနောက်သို့လိုက်ဘူး။ Burgess သို့မဟုတ် Prause ကဒီအသရေဖျက်မှုပြောဆိုချက်ကိုအတွက်အမှန်တကယ်သက်သေအထောက်အထားမရှိ, Prause ရှိကြောင်းသက်သေအထောက်အထားမရှိသကဲ့သို့ ငါ့ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့တားမြစ်မိန့်, ဒါမှမဟုတ်ကြောင်း သူမသည်တရားဝင်ရဲအစီရင်ခံစာများတင်သွင်းခဲ့သည် ကိုယ့်အကြောင်း။ ဤရွေ့ကားသင်္ခါရများစွာကိုအခြားသူများနှင့်, ဒီမှာဖြေရှင်းနေကြသည်:
အမှန်တကယ်တွင် Prause သည် (၇ နှစ်ကျော်) ကျွန်ုပ်နှင့်အခြားသူများကိုဆိုက်ဘာနှောက်ယှက်ခြင်း၊ အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောက်ယှက်ခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ အထက်စာမျက်နှာများမှကဏ္sectionsများစွာသည်ညစ်ညမ်းသောပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်များအတွက်မှတ်ချက်များတင်ရန် Prause တွင်အသုံးပြုသောနာမည်များစွာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်အားနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းသောဆေးမှထွက်ရန်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသော ED မှပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကြိုးစားနေသောအမျိုးသားများနှင့်အငြင်းပွားရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအချို့ -
နိုဝင်ဘာလ 2013: Prause သူမ၏ SPAN Lab မှက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရေဖျက်မှု PDF ကိုနေရာ။ အကြောင်းအရာမှန်က်ဘ်လှည့်ပတ် "အမည်မသိ" မှတ်ချက်များ
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃– Prause ၏ပထမဆုံးတွစ်တာမှာ Wilson & CBC အကြောင်းဖြစ်သည်။ “ RealScience” သည်ထိုနေ့တွင်ပင်မှားယွင်းသောပြောဆိုမှုများကိုတင်ခဲ့သည်
ဇန်နဝါရီလ, 2015: တစ် YourBrainRebalanced.com trolls က9လအတွင်းအစောပိုင်းကဖော်ပြထား "ဒီ Prause အခန်း" နောက်ဆုံးတော့ထုတ်ဝေ
မေလ 2014: Prause SOCKS ရုပ်သေးဇင်သာ Prause အကြောင်းကိုငါသိ၏သို့မဟုတ်ဂရုမစိုက်မယ်လို့ porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက် post
အောက်တိုဘာလ, 2016: Prause မုသားသက်သေခံမှုအလက်ဇန္ဒား Rhodes နှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကတိပြု
မတ်လ, 2018 - ဂယ်ရီ Wilson ကတောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်ကနေပစ်ခတ်ခဲ့သရေဖျက်မှုပြောဆိုချက်ကို
မတ်လ 5, 2018 - Prause အပြီးအပိုင်ဂယ်ရီ Wilson ကနှောင့်ယှက်ဘို့ Quora ကနေတားမြစ်ပိတ်ပင်
မေ ၂၀၊ ၂၀၁၈ - Ley & Prause က Gary Wilson & Don Hilton ကို Chris Sevier မှသက်သေပြခဲ့သည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်
မေလ 30, 2018 - Prause မဟုတ်မမှန်သိပ္ပံလိမ်လည်မှု FTND စွပ်စွဲဖြင့်, သူသည်နှစ်ကြိမ် FBI ကမှဂယ်ရီအစီရင်ခံခဲ့သည်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်
ဇူလိုင်လ 6, 2018 "တစ်စုံတစ်ဦးက" အခြေအမြစ်မရှိအဖြစ်တိုင်ကြားချက်ပယ်ချသောအော်ရီဂွန်စိတ်ပညာဘုတ်အဖွဲ့မှဂယ်ရီ Wilson ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်
အပြုအမူသိပ္ပံပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ (။ ပန်းခြံ et al, 2015) ရှိသည်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပြန်ရုပ်သိမ်း - 2018 မှစ. 2016 မှတဆင့်
လေ့လာမှု 3) list: Burgess ကြောင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသော peer-ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုများလျစ်လျူရှု။ YBOP ပေါ်မှာရှိသမျှလေ့လာမှုများလူတိုင်းတွေ့မြင်ရန်အဘို့အရှိပါသည်။ အဘယ်သူမျှမ mischaracterized ပါပြီ။ ကြှနျတေျာ့စာရင်းများတွင်အပေါငျးတို့သလေ့လာမှုများကောက်နှုတ်ချက်ဆံ့နှင့်မူရင်းစာတမ်းများမှလင့်များရှိသည်။ Burgess သူတို့၏ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီမှာစာရင်းနေသောခေါင်းစဉ်:
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? 75 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး 270 ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများကျော်ဒါမှမဟုတ်စာပေဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13, ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15, ပြန်လည်သုံးသပ်မှု # 16သုတေသန၏ဤသုံးသပ်ချက်နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း:
4) က CBC: အဆိုပါ CBC မျှထိုကဲ့သို့သောအရာကိုပြု၏။ ယင်း၏ထုတ်လုပ်သူတစ်ခုမှာ, သို့သော်, ပရိယာယ်နှင့်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ပေ။ ဤတွင် CBC နှင့်အတူသှားသောအရာကိုအကြောင်း porn ပြန်လည်နာလန်ထူ site ပေါ်တွင်ဖော်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးသားချက်များများမှာ။ ကြောင်းသတိထားမိ နီကိုးလ် Prause ထိုချည်မျှင်အတွက် (ရီးရဲလ်သိပ္ပံကဲ့သို့) posted (သူမမကြာခဏအမျိုးမျိုးသောနာမည်သုံးပြီးပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်အပေါ် posted ကဲ့သို့) ။ ဥပမာ, သူမသည်ငါ့လိင်တံ၏အရွယ်အစားအကြောင်းမေး။ (အလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။ )
မှတ်စု: သူမ၏တွစ်တာအကောင့်အသစ်အတွက်နီကိုးလ်ပရာ့စ်၏အပျိုတင်စာမှာ Gary Wilson နှင့် CBC အင်တာဗျူးအကြောင်းဖြစ်သည်။ ငါ Prause ၏မူရင်းအဖြစ်တွစ်တာကို ချိတ်ဆက်၍ မရပါ တွစ်တာအကောင့်ကိုအပြီးတိုင်ဆိုင်းငံ့ခဲ့သည် အဘယ်သူ၏ Todd မေတ္တာတော်, PsyD, JD, နှောင့်ယှက်ဘို့ စာပေ၏သုံးသပ်ချက်ကို စဉ်းစားဟန်သူမ၏အလုပ်ဝေဖန်ဝံ့။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နှင့် ၁၉ ရက်တို့တွင်“ RealScience” သည်ဂယ်ရီ Wilson ဖော်ပြခဲ့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆင်တူပြီးအထင်အမြင်လွဲစေသောမှတ်ချက်များကိုတင်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ 18 & 19 ရက်နေ့တွင်အများအပြားပိုပြီးပို့စ်များ “ RealScience” (သို့)“ Real Scientist” က) ။
NOTE2 သုတေသီများ၊ ဆေးဆရာဝန်များ၊ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ စိတ်ပညာရှင်များ၊ သူမအနေဖြင့်ယူကေ၊ ဗြိတိန်မှအလှူဒါနများ၊ အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း (ဤ2စာမကျြနှာကဆိုပါတယ်အပြုအမူတွေ၏ကျယ်ပြန့်မှတ်တမ်းတင်ပေး: စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3, စာမျက်နှာ 4, စာမျက်နှာ 5.
5) ကိုကင်း: YBOP တွင်ဘယ်သောအခါမှ“ Porn သည်ကိုကင်းကဲ့သို့မဟုတ်ပါ” ဟုကျွန်ုပ်မပြောရပါ။ Burgess ၏နောက်ထပ်လိမ်လည်မှု ဤတွင် YBOP မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများဖြစ်သည်။ကိုယ့်ကိုကင်းနဲ့တူ": ဦးနှောက်မှ porn စွဲအကြောင်းမရှိနောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပါသလား.
မှတ်စု: YBOP သည်ကိုကင်းနှင့်မက်သည်“ ညစ်ညမ်းသောသဘောနှင့်တူသည်” ဟူ၍ တစ်ခါမျှမပြောသော်လည်းလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်စွဲစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အလားတူအာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများနှင့်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများ (အစားအစာနှင့်ရေကဲ့သို့သောအခြားတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘာဝဆုကျေးဇူးများနှင့်မတူ)
လိင်စိတ်နိုးထနှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးကိုသက်ဝင် တူညီတဲ့ဆုလာဘ် circuit ကိုအာရုံကြောဆဲလ်တွေကိုတောင်း။ ဆနျ့ကငျြ, သာတစ်ဦးရှိပါတယ် သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း အာရုံကြောဆဲလ် activation ၏စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာသို့မဟုတ်ရေကဲ့သို့အခြားသဘာဝကဆုလာဘ်များအကြားထပ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဒါဆွဲဆောင်မှုစေတူညီတဲ့အာရုံကြောဆဲလ်တွေကိုဖွင့်ခြင်း meth, ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူဒီတော့စွဲလမ်းစေနိုင်ပါတယ်ရှင်းပြကူညီပေးသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာဘိန်းဖြူစွဲသူများကပစ်ခတ်မှုသည်“ အော်ဂဇင်ကဲ့သို့ခံစားရသည်” ဟုမကြာခဏဆိုကြသည်။ သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသည်ဘိန်းဖြူစွဲခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတူညီသောဆုိုင်နေသောဆားကစ်အာရုံကြောဆဲလ်များအပေါ်တုပသည်။ အထူးသ, သုတ်ရည်လွှတ်အာရုံကြောဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်အတူတူ dopamine ကျုံ့ ကြောင်းနာတာရှည်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူကျုံ့။ ဒါဟာလိင်မကောင်းဟုမဆိုလိုပါ။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကျောတစ် romp များအတွက်အိပ်ခန်းထဲသို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအတိအကျတူညီယန္တရားများ hijack ကိုအကြောင်းကြား။
သည်အခြား Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် (yummy အစားအစာသို့မဟုတ်သကြား) မတူဘဲ, ဒါပေမယ့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဆင်တူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံရှည်-တည်မြဲအပြောင်းအလဲများမှဦးဆောင် ဆုလာဘ်စင်တာအချိုမှု receptors ၏နံပါတ်များနှင့်အမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ အချိုမှုအကျိုးကိုစင်တာမှ key ကိုဦးနှောက်ဒေသများထံမှသတင်းအချက်အလက်များ relaying အဓိက neurotransmitter ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား neuroadaptations မြင်ကွင်းများ, အသံ, အတှေးအသို့မဟုတ်အလားအလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဆက်စပ်အမှတ်တရများမှအကျိုးကိုစင်တာ ပို. ထိခိုက်မခံစေကြလော့။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, နှစ်ဦးစလုံး လိင် နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု DeltaFosB, စွဲနှင့်အတူပါဝင်ဗီဇမြှင့်လုပ်ဆောင်တဲ့ပရိုတိန်းများစုစည်းနေခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ ဒါဟာတို့သည်အထုတ်ပေးအဆိုပါမော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နှစ်ဦးစလုံးနီးပါးတူညီ နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည်အသုံးပြုမှု။ လိင်မှုကိစ္စဖြစ်စေ၊ အလွဲသုံးစားမှုဖြစ်စေမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်စေ DeltaFosB ၏မြင့်မားသောပမာဏသည်“ IT” မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ IT အားတပ်မက်ရန် ဦး နှောက်အားတွန့်ဆုတ်စေသည်။ စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများပြန်ပေးဆွဲရုံသာမကဘဲ အတိအကျအာရုံကြောဆဲလ် လိင်စိတ်နိုးထစဉ်အတွင်း activated, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအလိုရှိကြသည်တွင်အောင်ပြောင်းလဲသောတူညီသင်ယူမှုယန္တရားများ-ရွေးချယ်ပူးတွဲ။
, အသေးစိတျမျိုးစုံယာယီအာရုံကြောနှင့်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများ elucidate ဖို့ဝေးလွန်းရှုပ်ထွေးနေစဉ် အော်ဂဇင်နှင့်အတူပေါ်ပေါက် အခြားသဘာဝကဆုလာဘ်နှင့်အတူပေါ်ပေါက်ကြပါဘူး။ ဤရွေ့ကားလျော့နည်းသွားဦးနှောက်အန်ဒရိုဂျင် receptor များပါဝင်သည်, hypothalamic enkephalins တိုးလာနှင့် oxytocin နှင့် prolactin ၏အသှေးကိုအဆင့်ဆင့်တိုးတက် estrogen receptor တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောဒီအမှန်တကယ်မှတ်ချက်အဖြစ်အကျွမ်းတဝင်စကားမှတ်ဆိတ်ကွယ်ရာလဲကျ: "ကောင်းပြီ, လှုပ်ရှားမှုများအများကြီး dopamine မြှင့်, ဒါကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမပိုနေဝင်ဆည်းဆာကိုကြည့်သို့မဟုတ်ဂေါက်သီးကစားခြင်းထက်စွဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်။"ဒါကပညာရေးဆိုင်ရာလိင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့စကား (အလွန်အပေါ်ယံနားလည်မှုဖြင့်)" အလားတူပင်၊ လိင်ပညာရှင်တစ် ဦး Marty Klein မှaZimbardo & Wilson ကဆောင်းပါး သူကအခိုင်အမာဆို porn ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုနေဝင်ချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ထက်မခြားနားသည်:
ဒါ့အပြင်ငါတို့မြေးကရှုပ်ထွေးသွားတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်နေဝင်ချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာအလားတူမြင်နိုင်လောက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုခံယူပါတယ်။ ”
အဆိုပါမာတီ Klein အရေးဆိုမှုကို 2000 fMRI လေ့လာမှုအတွက်ရှည်လျားသောလွန်ခဲ့တဲ့စမ်းသပ်ပြီးနှင့် debunked ခဲ့: "Cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ: neuroanatomical မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအဘို့တိကျတဲ့နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှု။ တစ်ဦးချင်းစီအက်ကွဲကိုကင်း, 1) ပြင်ပသဘာဝမြင်ကွင်းများနှင့် 2) ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဆေးလိပ်) 3: အဆိုပါလေ့လာမှုကိုကင်းစွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ ရလဒ်: သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ် porn နှင့်ကြည့်တွေကိုကြည့်ရှုသည့်အခါကင်းစွဲနီးပါးတူညီဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများရှိခဲ့ပါတယ်။ porn များအတွက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ (သို့သော်ကင်းစွဲခြင်းနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှစ်ဦးစလုံး porn များအတွက်တူညီသောဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများရှိခဲ့။ ) သို့သော်စွဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများသဘာဝမြင်ကွင်းများကြည့်ရှုသည့်အခါပုံစံများအနေဖြင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်။ နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရီစရာစကားမှတ်!
PS - Prause ၏စကားပြောခြင်းသည် porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ထိုသို့ဖြစ်သည် အဘယ်သူမျှမကွဲပြားသောအာရုံကြောခွေးပေါက်ဆော့ကစားစောင့်ကြည့်ထက် (သူတို့တစ်တွေဂါထာပြန်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်သူမ၏စဉ်းစားမတွေးတောနောက်လိုက်ဤပြောဆိုချက်ကိုပြန်လုပ်နှင့်အတူ) ။ ဤ မယုံနိုင်စရာအခိုင်အမာ Prause excuse သင့်တယ် အစဉ်အဆက် CSB နှင့် ပတ်သက်. neuroscience အပေါ်မှတ်ချက်ပေးမှ။
ဒံယလေသ Burgess: ဂယ်ရီရဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သိပ္ပံနည်းကျ“ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ” ကိုလှည့်ဖြားခြင်း၊ အလွန်အသုံးများလွန်းသော၊ မှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းနှင့်နားလည်မှုလွဲခြင်း“ Voon” သုတေသနပြုချက်တွင်၊ မကျူးလွန်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီရှိလိင်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများဂယ်ရီသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးပြtoနာများကိုတုံ့ပြန်သည့်နည်းတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ” ; “ ရှည်လျားစွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Valerie Voon လေ့လာမှုအားဗြိတိန်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်“ Porn on the Brain” တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများကညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများအားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများကိုတုန့်ပြန်သည့်နည်းတူပင်ညစ်ညမ်းရောဂါများကိုတုံ့ပြန်သည် လေ့လာမှုအပြည့်အစုံနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် -“ မလိုမုန်းထားလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ (၂၀၁၄)"
ဘယျအရာတကယ်တော့ said: ပထမ ဦး ဆုံး Voon လေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်သောမူရင်း YBOP ရေးသွင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော link ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ Voon သည်သူမ၏လေ့လာမှုနှင့်သူမ၏လေ့လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ဖော်ပြချက်သည်တိကျမှန်ကန်ခဲ့သည် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ် (Voon et al ။, 2014)
Voon ၏မေးမြန်းချက်: https://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/10962885/Love-is-the-drug-scientists-find.html
မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်သူတို့၏အပြုအမူသည်နည်းများစွာဖြင့်တူညီကြသည်။ ဤတူညီမှုသည် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါ ၀ င်မှုရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့သိလိုခဲ့သည်။ ”လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပြုလုပ်ထားသည့်လူနာများနှင့်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအကြား ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုတွင်ရှင်းလင်းစွာကွဲပြားမှုရှိသည်. ဤကွဲပြားခြားနားမှုများသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ထင်ဟပ်ချက်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ”
အဆိုပါ Voon လေ့လာမှုမှ:
"နီကိုတင်း, ကိုကင်းနှင့်အရက်၏မူးယစ် cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာလေ့လာမှုများ ventral striatum အပါအဝင်ကွန်ရက်များ ဆက်စပ်. အ, dACC နှင့် amygdala 13။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာဤဒေသများနှင့်အတူအဖွဲ့များကိုဖြတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကြည့်ရှုစဉ်နှင့် CSB မပါဘဲ activated ခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ် CSB တွင်ဤဒေသအားကောင်း Active ၏လေ့လာရေးအတွက်မမှန်ဖြတ်ပြီး neurobiological တူညီအကြံပြုခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအဘို့အစောင့်ကြည့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဆင်တူသည်။"
ဒုတိယ Valerie Voon CSB လေ့လာမှုကိုပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာချက်များ၏တွေ့ရှိချက်များကိုအကျဉ်းချုပ်:
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် ... စွဲ၏ရောဂါများအတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုများ၏လေ့လာမှုများမှာလေ့လာတွေ့ရှိတိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သမျှထပ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ T ကhese တွေ့ရှိချက် CSB ဘာသာရပ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရန်ထစ်အငေါ့တုံ့ပြန်မှုအခြေခံဒါဟာမူးယစ်ဆေး-cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရကြောင်းအလားတူကွန်ယက်အတွက် CSB ဘာသာရပ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအာရုံကြော reactivity ကို၏မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူဆုံနှင့်စွဲလမ်း၏မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီအဘို့အထောကျပံ့ပေး တွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများမူးယစ်ဆေး-cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းဆင်တူတဲ့အာရုံကြောကွန်ယက်တွင် သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသောငါတို့မကြာသေးမီလေ့လာရေးနှင့်အတူအံ. သာ. ကွီးမွတျအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်လိုသောထက်အကြိုက်နောက်ထပ်ဒီအာရုံကြောကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကိုအတူတကွ CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဆီသို့ထစ်အငေါ့တုံ့ပြန်မှုအခြေခံစွဲတစ်ခုမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီအဘို့အထောကျပံ့ပေးသညျ။
Valerie Voon, Shane Kraus နှင့်မာ့ခ် Potenza အားဖြင့်တစ်ဦး 2016 ပြန်လည်သုံးသပ်မှ: တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Compulsive သငျ့သလော (Kraus et al ။, 2016).
DSM-5 များလွှတ်ပေးရေးနှင့်အတူလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူ reclassified ခဲ့သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုစွဲသာစိတ်ကို-ပြောင်းလဲဝတ္ထုများ၏ ingesting နှင့်မူဝါဒ, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုမဟာဗျူဟာအဘို့အသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဖွငျ့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းယုံကြည်ချက်စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ : DATA သည်အခြားအပြုအမူတွေအတွက်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (ဥပမာဂိမ်းကစားခြင်း, လိင်, compulsive စျေးဝယ်) ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူလက်တွေ့မျိုးရိုးဗီဇ, neurobiological နှင့်ဖြစ်စဉ်မျဉ်းပြိုင်ဝေမျှစေခြင်းငှါအကြံပြု......
ထပ် features တွေ CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားတည်ရှိနေ။ ဘုံ neurotransmitter စနစ်များ CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ, မကြာသေးမီ neuroimaging လေ့လာမှုများတဏှာနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းတူညီမီးမောင်းထိုးပြ။ အလားတူ pharmacological နှင့် psychotherapeutic ကုသ CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစှဲဖို့သက်ဆိုင်သောဖြစ်နိုင်သည်
အားလုံးကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, Burgess ရိုးရှင်းစွာလိမ်ညာ။
ဒါ့အပြင်အဘယ်ကြောင့် Burgess အစွဲအလမ်းကြီး သာ နှင့် Voon et al ။, 2014? အဘယ်ကြောင့်ဒံယလေသ Burgess အခြားလျစ်လျူရှုထားဘူး 52 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ရက်နေ့တွင်စာရင်း YBOP ၏ ဦး နှောက်လေ့လာမှုစာမျက်နှာ? (၄၄ ဦး လုံးသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုခိုင်မာသည့်အထောက်အပံ့များပေးပြီးသူတို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုလေ့လာမှုများတွင်ဖော်ပြထားသောအာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ Burgess သည်အခြားအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှု ၄၄ ခုရှိသည်ကိုသတိမထားမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Prause ကသူ့အားစကားပြောနေသည့်အချက်များအားလုံးကိုကျွေးမွေးရန်ဇုံဟုထင်ရသည်။
ဒံယလေသ Burgess: အခြားစာမူတစ်ခုတွင်ဂယ်ရီက“ Porn သည် meth ကဲ့သို့စွဲလမ်းစေသည်” ဟုဆိုသည် ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ရင်မင်းကိုအဓမ္မပြုကျင့်စေနိုင်တယ် မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို porn နှင့်လုံးဝမပတ်သက်သည့်ကျပန်းမုဒိမ်းကျင့်သည့်ဂရပ်အချို့ကိုအသုံးပြုခြင်း။ (https://www.thenakedscientists.com/forum/index.php?topic=54214.0))
Gary Wilson: Burgess လင့်ခ်၏စာမျက်နှာခဲ့သည် မဟုတ် ငါကတင်ခဲ့သည်။ ငါဒီ post သို့မဟုတ်ထို website ကိုယခုတိုင်အောင်မြင်ဖူးဘူး။ Burgess ၏“ Gary Wilson” အတုသည်ထူးဆန်းသည့်ရာထူးတစ်ခုသာရှိသည်။ မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်မှာ Burgess သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ဘယ်သောအခါမျှမချိတ်ဆက်ပါ။porn meth သကဲ့သို့စွဲလမ်းဖြစ်ပါသည်။ "Burgess တစ်ဖန်ပြန်လည်လဲလျောင်းနေသည်။
အဘယ်သူသည်အတုအားဖြင့်အတုပို့စ်နှငျ့အတူသူ့ကိုထောက်ပံ့ "ဂယ်ရီ Wilson က?" Prause ငါ့ကိုအကြောင်းကိုဘာမှအဘို့အဝဘ် scours ။ ဥပမာအားဖြင့်, လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ် Prause Quora, Twitter ပေါ်နှင့်လူကြီးစက်မှုလုပ်ငန်း website တွင် (ထိုသူတို့နှင့် ပတ်သက်. မျိုးစုံသရေဖျက်မှုတောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူ) ငါ၏အတောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်အလုပ်အကိုင်စာရွက်စာတမ်းများတင်လိုက်တယ်။ သူမသည်မဟုတ်မမှန်ငါပစ်ခတ်ခဲ့သည်ပြောဆိုထားသည်။ သူမသည်ကြောင့်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်တည်းဖြတ်ရန်သတင်းအချက်အလက်ကိုထင်ယောင်ထင်မှားဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤတွင် Prause တစ်ဦးညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရေဖျက်မှုပုံပြင်အားမရအပါအဝင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်အရာအားလုံးကို၏စာရွက်စာတမ်းများင်: Nicole Prause & David Ley သည် Gary Wilson အားတောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်မှမောင်းထုတ်သည်ဟုဆိုသည်
အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများ Quora ကနေဖယ်ရှားနှင့် Prause အပြီးအပိုင်ပိတ်ပင်ထားခံခဲ့ရသည်။ Twitter ကိုတနေ့များအတွက်သူမ၏ပိတ်ပင်ထားနှင့်သူမ၏သတိပေးအပ်ပေးတော်မူ၏။ အဆိုပါ porn site ကိုကတည်းကသရေဖျက်မှုဆောင်းပါးဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ကြည့်ရှုပါ:
မတ်လ 5, 2018 - Prause အပြီးအပိုင်ဂယ်ရီ Wilson ကနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် defaming များအတွက် Quora ကနေတားမြစ်ပိတ်ပင်
ဒံယလေသ Burgess: မလိုမုန်းတီးသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းသောဆန္ဒများကိုလိုချင်တပ်မက်ကြသည်။ သို့သော်ထိန်းချုပ်မှုများထက်လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှု (ကြိုက်နှစ်သက်မှု) မရှိကြပါ။ ဤတွေ့ရှိချက်သည်လက်ရှိစွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ကာ“ ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒများ” သည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောသီအိုရီကိုငြင်းဆန်သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပျော်မွေ့လိုသောကြောင့်လိုချင်သောကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်ခံရသည်ဟုယူဆကြသည် ဤပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်စဉ်ကိုစွဲစွဲလမ်းမှုလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်လူသိများသည်။ admin မှ Thu၊ 07/10/2014 - 16:09 တွင်တင်ပြသည်
Gary Wilson: ငါ၏ဖော်ပြချက် Voon et al ။ , 2014 ဿုံတိကျမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ Voon အတူတူပင်ကဆိုသည်။ သူမ၏လေ့လာမှုမှ:
ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSB ဘာသာရပ်များ သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိခဲ့သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုလိုသောနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုပိုမိုအကြိုက်ရမှတ်ခဲ့ အရှင်လိုသောနဲ့ like နှိပ်အကြားတစ်ဦး dissociation ဆန္ဒပြနေသော။ CSB ဘာသာရပ်များလည်းရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်စိတ်နိုးထနှင့် erectile အခက်အခဲများပိုမိုချို့ယွင်းခဲ့ပေမယ့်မပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက်မြှင့်တင်ရန်ဆန္ဒရမှတ်မြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒယေဘူယျအဆိုပါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုနှင့်မတိကျသောဖြစ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue ဆီသို့ဦးတည်လိုသောထစ်အငေါ့သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုအလေးပေးမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီနှင့်အတူအထွေထွေလူဦးရေအလားတူချိုးငှက်အမြီးအတွက်မဟုတ် '' အကြိုက် 'သို့မဟုတ် hedonic သေံ၏ CSB အာရုံစိုက်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် .
စွဲလမ်း၏ဆုံးကျယ်ပြန့်လက်ခံထားသောမော်ဒယ် "ဟုဖြစ်ပါသည်မက်လုံးပေးာင်း "မော်ဒယ် (IST)။ IST များအတွက်အမှတ်အသားများ သာ. ကြီးမြတ် cue-reactivity ကိုသို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့မတရားသောဖြစ်ကြသည်။ ယခုအဲဒီမှာရှိတယ်နေကြသည်များမှာ 25 အာရုံကြောလေ့လာမှုများ Prause ၏ကိုယ်ပိုင်အပါအ ၀ င်မလိုမုန်းတီးသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ (သို့) လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက် cue-reactivity (သို့) စွဲလမ်းမှု (sensitization) ကိုသတင်းပေးပို့သော သံမဏိ et al ။ , 2013။ (မှတ်စု - Voon တစ်အပိုဒ်မြှုပ်နှံ သံမဏိ et al။ , 2013 Prause ၏တွေ့ရှိချက်များသည်သူမ၏တွေ့ရှိချက်များကိုထင်ဟပ်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။)
Neurosceince-based လေ့လာမှုများ IST စွဲစွဲလမ်းမှုနှင့်ကိုက်ညီသောတွေ့ရှိချက်များကိုသတင်းပို့သည်။
တစ်ဦးသိမှုအပြုအမူကြည့်ရန် မှစ. ကျဘာစွဲမှပံ့ပိုးအချက်များအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလအထောက်အထားများနှင့်သီအိုရီကိုစဉ်းစား (Laier et al ။, 2014)
အသစ်အဆန်း, အခြေအနေများနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များ (2015) မှ
Hypersexual Disorder ၏ Pathophysiology အတွက် Neuroinflammation ၏အခန်းက္ပ (2016)
ပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ (2016) ၏ရောဂါလက္ခဏာများဆက်နွယ်နေကြောင်းသောအခါ Ventral striatum လှုပ်ရှားမှု
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပါ ၀ င်သောအမျိုးသားများအတွက်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဥာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဦး နှောက်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြောင်းလဲစေသည်။
အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ပုဂ္ဂလဒိreward္ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုလူ့အသိုက်နှင့် Orbitofrontal cortex (၂၀၂၀) တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအာရုံကြောသိပ္ပံ - ကာကွယ်တားဆီးရေးကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အမျိုးသမီးများအတွက် prefrontal cortex နှင့် ၀ က်သားစားသုံးမှုကို fNIRS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
Voon ရဲ့အလိုဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်သူမရဲ့ဘာသာရပ်များဟာ ASEX မှာအမှတ်အနည်းငယ်ရခဲ့ပြီးသူတို့ထဲက ၁၁ ယောက်ဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမရှိဘဲနှိုးဆွခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ငါပြောခဲ့သည်မှာ Prause ကသူမ၏ 11 EEG လေ့လာမှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသောဆန္ဒကိုထောက်ခံသည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, (လိင်ပုံများအားဖြင့်ရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်သံမဏိ et al ။, 2013)။ ။ လက်တွေ့ဘဝမှာတော့သံမဏိ et al, 2013 ပြောဆိုချက်ကိုသာကိုစုဝေးစေ data အားလုံးကိုအကြား ea တစ်ခုတည်းကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဆက်စပ်အပေါ်တွေ့ပြီမှ:
ဘာသာပြန်ချက်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုထိရောက်စွာတုံ့ပြန်နိုင်သူများသည်အဖော်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသည့်ဆန္ဒအနိမ့်အမြင့်ရှိကြသည် (သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအလိုမရှိကြပါ) ။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် ဦး နှောက်ကိုပိုမိုတက်ကြွစေတဲ့၊ ညစ်ညမ်းလိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြသူတွေကတကယ့်လူတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာထက်ညစ်ညမ်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာပါပဲ။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်, လေ့လာမှုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နီကိုးလ် Prause "မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်" porn အသုံးပြုသူများသည်မျှသာရှိခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာမရှိသေးပါလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုပြောပါ အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက် (လိင်ဆက်ဆံသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသူများသည်၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍) သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများရှစ်အမှန်တရားရှင်းပြ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013။ တစ်ဦးလည်းကြည့်ရှု ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။
မှတ်စု: လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိသည်” ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုမှားယွင်းသောလေ့လာမှု ၂၅ ခုကျော်စာရင်း။
ဒံယလေသ Burgess Tသူအမှန်တကယ်သုတေသနက၎င်း၏နိဂုံး၌ဤကပြောပါတယ်; "ဒီတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများရောဂါဗေဒစားသုံးမှု၏ရောဂါများအခြေခံကွန်ရက်များတွင်ထပ်တူအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုကပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်မှုတွေနဲ့ထပ်တူကျတာကိုအကြံပြုနိုင်ပေမဲ့ CSB ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှု - ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ရောင်စဉ်တစ်ခုအတွင်းသို့မဟုတ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ခွဲခြားသင့်သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရန်နောက်ထပ်လက်တွေ့လေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။ ”
Gary Wilson: ဒါကသတိထားသိပ္ပံပညာရှင်များထိုကဲ့သို့သောကြောင်းသူမက "သူမ၏ပြောဆိုချက်ကိုအဖြစ်သူမ၏မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူ Prause မတူပဲ (အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုင်အဆိုပါ porn စွဲမော်ဒယ် debunkedတစ်ခုတည်းချို့ယွင်းချက်လေ့လာမှုနှင့်အတူ "။ သို့သော်၎င်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Valerie Voon ၏တွေ့ရှိချက်များသို့မဟုတ်သူမ၏အနာဂတ်နိဂုံးချုပ်ချက်များကိုမလိုက်နာနိုင်ပါ။ မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် Valerie Voon မှနောက်ထပ် ၄ ခုအပါအ ၀ င်အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုပေါင်း ၃၆ ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အားလုံးသည်ပစ္စည်းဥစ္စာများအပြင်လေ့လာမှုများတွင်တွေ့မြင်ရသူများကိုထင်ဟပ်စေသောတွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြသည်.
2017 ခုနှစ်, Voon, ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet တွင်ဤသူ၌ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် Co-ရေးသား အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း (Potenza et al ။, 2017)။ ဤတွင် Voon ယခု CSB အဆိုပါစွဲမော်ဒယ်ကိုက်ညီသောသူမ၏လက်ရှိယုံကြည်ချက်သရုပ်ပြ, အဘယ်သို့မိန့်င်:
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ၏ neurobiology သို့သုတေသနအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု, မက်လုံးပေး salience အရည်အသွေးများနှင့်စှဲနှင့်အတူများပြားလှသောတူညီအကြံပြုကြောင်းဦးနှောက်-based cue reactivity ကိုပတ်သက်တွေ့ရှိချက်ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါတဏှာ, ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ, compulsive ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်လျော့နည်းသွားထိန်းချုပ်မှုကြားမှထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်လက်တဲ့အဆိုပြုထားအမြင်နှင့်ကိုက်ညီချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုကိုယ်စားပြု, ICD-11 အတွက်အရင်းခံတွန်းအား-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်အဆိုပြုနေပါသည်။ ဒီအမြင်အချို့ DSM-IV ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်များအတွက်အထူးရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသင့်လျော်သောပါပြီပေလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤဒြပ်စင်ရှည်လျားစှဲဖို့အလယ်ပိုင်းစဉ်းစားခဲ့ကြခြင်း, DSM-5 မှ DSM-IV ကနေအကူးအပြောင်းအတွက်အခြားသောခွဲခြားမ Impulse Control ကို Disorders ၏အမျိုးအစားတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်အမည်ပြောင်းနှင့် reclassified ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူ, restructured ခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်, ICD-11 beta ကိုမူကြမ်းဆိုဒ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်စာရင်းပြုစုခြင်း, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ, pyromania, kleptomania နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါပါဝင်သည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါလက်ရှိတွင် ICD-11 မူကြမ်းက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါများအတွက်အဆိုပြုလိင်စွဲလမ်း၏ကျဉ်းသက်တမ်းနှင့်အတူတသမတ်တည်း, ICD-11 များအတွက်အဆိုပြု Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမမှန်နှင့်အတူကောင်းစွာ fit မှပုံရသည်။ ကျနော်တို့သုတေသီများတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါခွဲခြားမကြာသေးမီဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီသည်နှင့် Clinician အတှကျအကြိုးရှိစေခြင်းငှါယုံကြည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ခံစားခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီရောဂါကြောင့်ထိခိုက်။
ဒံယလေသ Burgess ထို့အပြင် ဦး ဆောင်သုတေသနပညာရှင် Voon ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်“ Voon သည်သူမ၏လေ့လာမှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းမှခုန်ထွက်ရန်အမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူမကရှင်းပြသည်မှာသုတေသနများစွာလိုအပ်သည်။
Gary Wilson: Voon ၏ ၂၀၁၄ မှတ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဘာမှမပတ်သက်ပါ။ သူမကပဲနောက်ထပ်လေ့လာမှုတွေလုပ်ဖို့လိုနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ် နှင့်များစွာသောအခြားလေ့လာမှုများ ရှိ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှစတင်၍ ထုတ်ဝေသည်။ ဤတွင်နောက်ထပ်အာရုံကြောသိပ္ပံအခြေပြုလေ့လာမှု ၅၃ ခု၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် ၂၉ ခု။ https://www.yourbrainonporn.com/brain-scan-studies-porn-users.
Voon4ပိုပြီးအာရုံကြောလေ့လာမှုများနှင့်3ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း / မှတ်ချက်အထုတ်ဝေခဲ့သကဲ့သို့ Burgess, အမြန်နှုန်းအထိစောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။ Voon ရဲ့ neuroscience လေ့လာမှုများ:
Valerie Voon ၏နောက်ဆုံးဝေဖန်ချက်မှ အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း 2017)
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါလက်ရှိတွင် ICD-11 မူကြမ်းက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါများအတွက်အဆိုပြုလိင်စွဲလမ်း၏ကျဉ်းသက်တမ်းနှင့်အတူတသမတ်တည်း, ICD-11 များအတွက်အဆိုပြု Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမမှန်နှင့်အတူကောင်းစွာ fit မှပုံရသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါများကိုစွဲလမ်းစေသောရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်မကြာသေးမီကအချက်အလက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
ဒံယလေသ Burgess Los Angeles, California ရှိ University of Nicole Prause က electroencephalography (EEG) ကိုသုံးပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေနဲ့ပါ ၀ င်တဲ့လူတွေရဲ့ ဦး နှောက်လှိုင်းတွေကိုတိုင်းတာနိုင်ခဲ့တယ်။ သူမသည် porn နှင့်ပြproblemနာရှိသည်ဟုယုံကြည်သောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည်ဖြစ်ပေါ်နေသောအရိပ်အယောင်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခြားစွဲလမ်းသူများနှင့်မတူဘဲ ဦး နှောက်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးသောပုံများကိုတုန့်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသူသတိပြုမိသည်။ “ ဒီလူတွေဟာပြproblemsနာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့တခြားအမျိုးအစားတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ “ စွဲလမ်းမှုဆိုတာအဲဒါကိုနားလည်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ဘူး။ ” https://www.1843magazine.com/…/can-you-really-be...
Gary Wilson: Burgess ကိုးကားထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်, ကိုးကား. ဖြစ်ပါတယ် Prause et al ။ , 2015။ Prause ကသူမသည်ညစ်ညမ်းသောစက္ကူဖြင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုပြေပျောက်စေခဲ့သည်။ ရလဒ် -“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရသူများ” နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် vanilla porn ဓါတ်ပုံများကိုတစ်စက္ကန့်ထိအနည်းငယ်သာ ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုနည်းသည် Prause ကဒီရလဒ်တွေကို“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲစွဲလမ်းမှု” ကိုပြသသည်။
သူတို့ရဲ့တည်းသောလေ့လာမှုတစ်ခု debunked မူကြောင်းကိုတရားဝင်အဘယ်အရာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တောင်းဆိုမယ်လို့ လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်? အဖြစ်မှန်မှာတော့၏တွေ့ရှိချက်များ Prause et al ။ 2015 နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat ကို (2014), အရာထက်ပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို vanilla porn ၏ရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Prause et al။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်းနှင့်အတူ align BANCA et al ။ 2015။ EEG နိမ့်ဖတ်ခြင်းကဘာသာရပ်များသည်ရုပ်ပုံများကိုအာရုံစိုက်မှုနည်းသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည် vanilla porn ၏ငြိမ်သက်သောပုံရိပ်များကိုအထင်မသေးပါ။ သူတို့တွေဟာပျင်းစရာကောင်းလောက်အောင်ပျံ့နှံ့သွားတယ်။ စွဲလမ်းနှင့်ကိုက်ညီသောအရာ။ ဒီကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှုကိုကြည့်ပါ။ ကိုး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများဒီလေ့လာမှုအမှန်တကယ်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသဘောတူ: '' Porn စွဲ '' နှင့်အတူတသမတ်တည်းရှိမနေသောပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ Modulation "၏ YBOP ဝေဖန်မှု (Prause et al ။, 2015) "
ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်း ၁၀ ခုသည် YBOP ၏အကဲဖြတ်ချက်ကိုသဘောတူသည် of Prause et al ။, 2015။ တစ်ခုချင်းစီကို link ကိုသက်ဆိုင်ရာကောက်နှုတ်ချက်နှင့်မူရင်းစာရွက်မှ link တစ်ခုရသွားသည်။
ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေများအတွက် LPP လျော့နည်းသွားစွဲမော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အရာအားလုံးမော်ဒယ် (Prause, 2015 ဋီကာ) ပေါ်တွင်မူတည်သည်
ဒမာတေယူချ် Gola ရဲ့ဝေဖန်မှုကနေကောက်နှုတ်ချက် Prause et al ။ , 2015 ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေစွဲမော်ဒယ်များနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်နိုင်သည်များအတွက် (LPP လျော့နည်းသွားအရာအားလုံးပုံစံပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Commentary အပေါ် Prause, 2015) ။
porn စွဲ "ဟုအဆိုပါလေ့လာမှုရဲ့ခေါင်းစဉ်ကို" ပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်အတူကိုက်ညီမှုထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာများ Modulation "၌ပေးအပ်နိဂုံးပိုင်း ungrounded ဖြစ်ပါသည် IST [စွဲ၏လက်ခံခဲ့သည်မော်ဒယ်] ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ ...
ကံမကောင်းစွာပဲ Prause et al ၏ရဲရင့်ခေါင်းစဉ်ကို။ (2015) ပြီးသား, အရှင်, အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ် တစ်သိပ္ပံနည်းကျမတရားမှုဖွနိဂုံးချုပ်ကိုလူသိများ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှု၏ခေါင်းစဉ်၏လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအရေးပါမှုကြောင့်, သုတေသီများ သာ. ကြီးမြတ်သတိနဲ့အနာဂတ်ကောက်ချက်ဆွဲသင့်တယ်...
Gola နှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုတှငျဖျောပွထားသောအခြားသူများကအဖြစ်, Prause et al ။ , 2015 ပြုသကဲ့သို့ဆိုးဝါးအားနည်းချက်တွေကို (ခံစားခဲ့ရ အယ်လ်မှာသံမဏိ။ , 2013), ကဲ့သို့:
1) နှင့်ဝသကဲ့သို့ Prause ၏ ၂၀၁၃ EEG လေ့လာမှု (သံမဏိ et al.), ဒီလေ့လာမှုမှာဘာသာရပ်များယောက်ျား, မိန်းမနှင့်ဖြစ်နိုင်သည် "Non-heterosexuals" ဖြစ်ကြသည်။ သက်သေအထောက်အထားများအားလုံးအရ Prause သည်သူမ၏လက်ရှိလေ့လာမှုနှင့်သူမ၏ ၂၀၁၃ လေ့လာမှုအတွက်တူညီသောဘာသာရပ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးအရေအတွက်သည်တူညီကြသည် (၁၃) နှင့်စုစုပေါင်းအရေအတွက်သည်အလွန်နီးကပ်သည် (၅၂ နှင့် ၅၅) ။ ရှိလျှင်, ဒီလက်ရှိလေ့လာမှု (၇) လိင်ကွဲလိင်ကွဲသူ (၇) ယောက်ပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်သုတေသီများကို select သောစွဲလေ့လာမှုများ, များအတွက်စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းချိုးဖောက်နေသောကြောင့်ဤအရေးပါ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း အသက်၊ ကျား၊ မ၊ တိမ်းညွတ်မှုနှင့်ဆင်တူသောအိုင်ကျူ (IQ) အရဘာသာရပ်များ (ပိုပြီး ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်ယွင်းရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်) ။ ဒါဟာသုတေသနအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင် (လေ့လာရေးမှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိသည်အတည်ပြုအဖြစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှ arousal တိုင်းတာသောဤတစျခုကဲ့သို့လေ့လာမှုများအဘို့အထူးသဖြင့်အရေးပါသည်: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) ။ ဤအားနည်းချက်တစ်ခုတည်းက Prause ၏ EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးကိုမေးခွန်းထုတ်သည်။
2) Prause ၏ဘာသာရပ်များကိုကြိုတင်မစစ်ဆေးထားပါ။ ခိုင်လုံသောစွဲ ဦး နှောက်လေ့လာမှုများသည်ယခင်ကအခြေအနေများ (စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ OCD၊ အခြားစွဲလမ်းမှုများ) ရှိသူများကိုစစ်ဆေးသည်။ ဤသည်တာ ၀ န်ရှိသောသုတေသီများသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောက်ချက်ဆွဲနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှုများ သငျ့လျြောသောစိစစ်ခြင်းနှင့်နည်းစနစ်၏ဥပမာတစ်ခုပါ။
3) EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးတွင်“ porn စွဲ” မှုကိုအကဲဖြတ်ရန် Prause သည်မေးခွန်းနှစ်ခုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှု / စွဲလမ်းမှုအတွက်စစ်ဆေးရန်အတွက်အတည်မပြုပါ။
၄။ Prause ၏ဘာသာရပ်များသည်အမှန်တကယ်တွင်လိင်စွဲလမ်းသူများဖြစ်သည့်မည်သူမျှမသိရှိပါ။ ဤလေ့လာမှု ၃ ခု၏ဖော်ပြချက်များတွင်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းသူများ” ပတ် ၀ န်းကျင်၌ကိုးကားအမှတ်အသားများမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ဘာသာရပ်များကိုအိုင်ဒါဟိုပြည်နယ်၊ ပိုတိုတယ်လိုမှအွန်လိုင်းကြော်ငြာများမှတဆင့်စုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိကြုံနေရပြဿနာများ။ "Pocatello, အိုင်ဒါဟို 50 ကျော်% Mormonism ဖြစ်ပါသည်, ထိုဘာသာရပ်များ၏ဤမျှလောက်များစွာသောကြောင်းခံစားရပေမည် မည်သည့် porn အသုံးပြုမှုပမာဏကြီးမားသောပြဿနာတရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး 2013 အင်တာဗျူးတွင် နီကိုးလ် Prause သူမ၏ဘာသာရပ်များ၏နံပါတ် (သူတို့ porn စွဲမဆိုလိုတာက - နှင့်သူမ၏လေ့လာမှု porn စွဲအကြောင်းကိုဘာမျှသက်သေပြနိုင်သည်) သာအသေးစားပြဿနာတွေကြုံတွေ့ကြောင်းဝန်ခံသည်:
သင်အမှန်တကယ်စွဲသူများအားအကဲဖြတ်မထားပါကသင်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုငြင်းဆန်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ Prause ၏တွေ့ရှိချက်များပင် IST ပုံစံနှင့်မကိုက်ညီပါ။ CSB ဘာသာရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလေ့လာမှု ၂၄ ခုသည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက် cue-reactivity & cravings 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
ဒံယလေသ Burgess: လေးစားခံရတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်နီကိုးလ်ကို Gary ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ။ အမှီအခိုကင်းစွာဖြင့်၊
Gary Wilson: Prause ရဲ့အလုပ်ကငါ့တုံ့ပြန်မှုငါ Prause critiquing peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများနှင့်ပါရဂူဘွဲ့ရဲ့ critiquing သူမ၏တောင်းဆိုမှုများကိုးကားဘယ်မှာဝေဖန်မှုဖြစ်ကြသည်။ ငါမူရင်းစာတမ်းများနှစ်ဦးစလုံးနှင့် Prause ရဲ့စာတမ်းများနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာအဆိုပါကောက်နှုတ်ချက်လင့်ထားသည်အားလုံးအောက်ပါလင့်ခ်၌တည်၏။ ငါစျေးပေါရှောင်ရှားရန် Burgess စိန်ခေါ် ကြော်ငြာ hominem တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ငါ့ဝေဖန်မှုများနှင့်အရာငါလင့်ထားသည်ဖို့ဆက်နွယ်သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုများ၏တိကျသောအကြောင်းအရာလိပ်စာ။
critiquing 1 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများနှင့်အတူ 9) ကျွန်ုပ်၏ဝေဖန်မှု, Prause et al ။ , 2015 - '' Porn စွဲ '' နှင့်အတူတသမတ်တည်းရှိမနေသောပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်လိင်ပုံများအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောဆောင်သောအလားအလာ Modulation "၏ YBOP ဝေဖန်မှု (Prause et al ။, 2015) "
critiquing2peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများနှင့်အတူ 8) ကျွန်ုပ်၏ဝေဖန်မှု, သံမဏိ et al ။ , 2013 - YBOP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ - "တစ်ဝေဖန်မှုသံမဏိ et al ။ , 2013 ": အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက် porn စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
စာတမ်းများ၏ဝေဖန်မှု YBOP နှင့် Prause စာရေးသူတစ်ဦးရှိရာဆောင်းပါးများကို lay:
Prause သည်သူမတစ်ဦးနှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးပညာသင်နှစ် (နှောင်းပိုင်းတွင် 2014 / အစောပိုင်း 2015 အတွက်သက်တမ်းတိုးမပေးစာချုပ်) ဖြစ်ပါသည် ရှည်လျားသောသမိုင်း စာရေးဆရာ, သုတေသီများ, ကုသ, သတင်းထောက်များကို, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ယောက်ျား, ဂျာနယ်အယ်ဒီတာများ, မျိုးစုံအဖွဲ့အစည်းများ, နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပျက်ဆီးအထောက်အထားအစီရင်ခံရန်ဝံ့သူကိုအခြားသူများကနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် defaming ၏။ သူမသည်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားအဆိုပါအဆိုအရ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved ပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။) ။ ဒါဟာအစ Prause ရှိစေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ FSC မှရရှိသောဘာသာရပ်များကိုသူမတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုဖြစ်ခြင်း FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး) ။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည် မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများ အကွောငျး သူမ၏လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို နှင့်သူမ၏ လေ့လာမှုရဲ့နည်းစနစ်။ ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတွေ့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
ဒံယလေသ Burgess: ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်း pseudoscience, ad hominem ဆီကိုပြန်သွားပါ။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒါကိုပြဖို့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။ Gary ရဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုအောင်မြင်စွာဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုကဘာလဲ။
Gary Wilson: သူကကျွန်မကိုအားဖြင့် pseudoscience သို့မဟုတ်ကြော်ငြာ hominem ဖြစ်စေ၏သုညဥပမာပေးထားတယျ။ ဒါကပုံမှန်နည်းဗျူဟာဖြစ်ပါသည် - သင်အမှန်တကယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့စွပ်စွဲ။ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာဝါဒဖြန့်။
ဒံယလေသ Burgess: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဦးတည်းဂယ်ရီထံမှပို့စ်များကို၏ထောင်ပေါင်းများစွာမှတဆင့်သွားတိုင်းအားနည်းချက်ထွက်ညွှန်ပြနှစ်ပေါင်းသုံးဖြုန်းနိုင်ပါ။
Gary Wilson: ကျေးဇူးပြုပြီးလုပ်ပါ အခြားသူများမြင်နိုင်သည့်အတိုင်းငါ Burgess သည် Valerie Voon လေ့လာမှုအားမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ Burgess သည် YBOP တွင်ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း (မက်နှင့်ကိုကင်းသည်“ ညစ်ညမ်းသောပုံနှင့်တူသည်”) လိမ်ခဲ့သည်။ Burgess သည် YBOP နှင့်မည်သည့်အခါကမျှဆက်သွယ်မှုမရှိပါ၊ YBOP မှကောက်နုတ်ချက်တစ်ခုကိုမည်သည့်အခါမျှပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ဒံယလေသ Burgess: BYU သုတေသီများတောင်မှဤသည် "စွဲလမ်းမှု" နောက်တစ်ခုဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဘာသာရေးပflိပက္ခသည်ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်
Gary Wilson: သူတို့သည်“ စွဲလမ်းခြင်း မှလွဲ၍ အခြားအရာ” ကိုရှာမတွေ့ပါ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်လေ့လာမှုအမှန်တကယ်တွေ့ရှိရသောအရာဖြစ်သည်။ "ပျက်ဆီးနေသောကုန်စည်: များ၏ဝေဖန်မှုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်ဆံရေးတော့ပူပန်အကြားတွင်တစ်ဦးအာမခံအဖြစ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏အမြင်" (Leonhardt, Willoughby, & Young-Petersen, 2017)
လေ့လာမှု၏စာရေးသူများမှာ David Ley ၏ယနေ့စိတ်ပညာ၏ post သည်သူတို့၏လေ့လာမှုကိုမှားယွင်းစွာတင်ပြခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။ http://www.unskewed.org/thinking-in-black-and-white-a-response-to-the-claim-that-religiosity-cause-the-harms-of-pornography/
သင် "porn စှဲလမျးသူ" တွေဟာယုံကြည်စျယာနျဘာသာတရားကိုမှမသက်ဆိုင်တဲ့ကြောင်းယောရှုသည် Grubbs အစီရင်ခံစာအားဖြင့်နှစ်ဦးကိုမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ။ အပြည့်အဝလေ့လာမှုများမှဖော်ပြချက်များနှင့်လင့်များအဘို့ဤဆောင်းပါးတွင်ကြည့်ပါ: ဘာသာရေးသမားများသည်ညစ်ညမ်းမှုနည်းပါးသောကြောင့်သူတို့စွဲနေကြောင်းယုံကြည်ရန်မဖြစ်နိုင်ချေ (၂၀၁၇) ။
ဒံယလေသ Burgess ထို့အပြင်လိင်စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံ၍ သက်သေအထောက်အထားများ -“ လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု၏ ဦး နှောက်ပုံရိပ် - မကြာသေးမီကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်အနာဂတ်လမ်းကြောင်းများ” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5711964/
Gary Wilson: အဆိုပါကိုးကားလေ့လာမှုမဟုတ်ပါဘူး "၎င်း၏၏ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်လူ့လိင်များ၏စမ်းသပ်ဦးနှောက်လေ့လာမှုမှာနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု“ ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းမှုမရှိဟုစာရွက်ပေါ်တွင်ဘာမျှမဖော်ပြထားပါ။ Burgess ၏စာရွက်နှင့်ပတ်သတ်သောအချက်အလက်များကိုတွက်ချက်သည့် CSB နှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်မှကောက်နုတ်ချက်။
လိင်လိုဒိုမိန်းအတွက် Neuroscientific စိတ်ဝင်စားမှုတိုးပွားလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအစွန်းပေါ်ကဆင်းကျဉ်းမြောင်းသည်။ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွသုံးပြီးအများအပြားလေ့လာမှုများ (ရိပ်မိ) hypersexual အပြုအမူ (ခေါ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, ဒါမှမဟုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု) [အာရုံကြော activation ပုံစံများမြားတှငျပွောငျးလဲဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းပြသကြ25-32] နှင့်ဒေသတွင်းဦးနှောက်အသံအတိုးအကျယ် [33•, 34] အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုသောကွန်ယက်၏ဒေသများရှိ [14•] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတိုးမြှင်လှုပ်ရှားမှု [သည့် VS အတွက်သရုပ်ပြခဲ့ပြီး25, 27] နှင့်လည်း hypersexual ယောက်ျားအတွက် amygdala အတွက် [25, 27, 28], လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue အကဲဆတ်ခြင်းပေးသောဖြစ်၏။ ဤသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင် [hypersexuality ၏စွဲသီအိုရီကိုထောကျပံ့ဖို့ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်35] ။ တခြားလေ့လာမှု, သို့သော်, [တုံ့ပြန်မှုမျိုးသုဉ်းသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ downregulation ကဲ့သို့စွဲလမ်းနှင့်အတူထင်ရသောသဟဇာတဖြစ်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ hypersexual လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုပြသ26, 28-30, 34] ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုအပြန်အလှန်သီးသန့်ဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ, hypersexuality နှင့်အတူယောက်ျားနှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုသို့မဟုတ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ (စွဲလမ်းတဲ့အင်္ဂါရပ်) sensitized နှင့်ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူ (ကသင်ယူလိုက်လျောညီထွေအဖြစ်) ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတိုးရန်မဖြစ်နိုင်ချေရှိပါလျှင်အတိုးသို့မဟုတ် Self-ထိန်းညှိဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ်တစ်ဦးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၏တင်ပြချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်ခန့်မှန်းတွေကိုအထပ်ထပ်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူတစ်ဦးပါရာဒိုင်းထဲမှာ, ACC အတွက် cue-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှု [hypersexuality-ပေမယ်သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအဘို့နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုနှင့်အတူပိုမိုမြန်ဆန်လျော့နည်းသွား26].
(ဒီစက္ကူ CSB ဘာသာရပ်များပေါ်မှာရှိသမျှအာရုံကြောလေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်ဘူးသတိပြုပါ။ )
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျနော်တို့စွဲမော်ဒယ်မှထောက်ခံမှုချေးအားလုံးသော 29 အမှန်တကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်မှတ်ချက်အရှိသည်လုပ်ပါ။ မူရင်းစာတမ်းများမှလင့်များနှင့်အတူစာရင်းနှင့်ကောက်နှုတ်ချက်: https://www.yourbrainonporn.com/brain-scan-studies-porn-users။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
1) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (et al Love ။, 2015). အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းခွဲအမျိုးအစားများ, နှင့် ပတ်သက်. neuroscience စာပေ၏တစ်ဦးကနှံ့နှံ့စပ်စပ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဤသုံးသပ်ချက်နှစ်ခု critiques ဆိုးသွမ်း EEG လေ့လာမှုများ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့များအားဖြင့် နီကိုးလ် Prause (သူကိုမဟုတ်မမှန်တွေ့ရှိချက် porn စွဲအပေါ်သံသယကိုနှင်ထုတ်ဆိုပါတယ်) ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
အတော်များများကအလားအလာလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာဆုလာဘ် circuitry ထိခိုက်အများအပြားအပြုအမူတွေကအနည်းဆုံးအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စွဲလမ်း၏အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပါသည်။ အင်တာနက်စွဲနှင့်စပ်လျဉ်း neuroscientific သုတေသနနောက်ခံအာရုံကြောဖြစ်စဉ်များပစ္စည်းဥစ္စာစွဲဆင်တူသောယူဆချက်ကို support ... ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွင်းမှာပဲကျနော်တို့သဘောတရားများကိုတစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်ပေးအခြေခံစွဲအဆိုပြုထားနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါအပေါ် neuroscientific လေ့လာမှုများအကြောင်းကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပေးပါ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်ရရှိနိုင် neuroscientific စာပေပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်စွဲမော်ဒယ်မှရလဒ်ချိတ်ဆက်ပါ။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲဟာစွဲလမ်းမူဘောင်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့်အတူရှယ်ယာအလားတူအခြေခံယန္တရားသို့ကိုက်ညီသောနိဂုံးချုပ်စေပါတယ်။
2) တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်လိင်စွဲ: အကဲဖြတ်ဘို့အထောက်အထား, Diagnosis နှင့်ဝေဖန်သူများမှတုံ့ပြန်မှု (Phillips က et al ။, 2015)သူတို့ကိုတန်ပြန်ကြောင်းအညွှန်းစာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, porn / လိင်စွဲလမ်း၏တိကျသောဝေဖန်မှုများအပေါ်ကြာမြင့်မယ့်ဇယားကိုထောက်ပံ့ပေးရာ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
ဤဆောင်းပါးတွင်တစ်လျှောက်လုံးမြင်ကြသကဲ့သို့ပင်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကျော်လက်တွေ့နှင့်သိပ္ပံနည်းကျလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးတရားဝင်စွဲအဖြစ်လိင်၏ဘုံဝေဖန်မှုများတက်ကိုင်ကြပါဘူး။ စွဲလမ်းအဖြစ်လက်ခံခံရဖို့လုံလောက်သောသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားနှင့်ထောက်ခံမှုလိင်များအတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားအပြုအမူတွေရှိပါသည်။ ဤသည်မှာထောက်ခံမှုအလေ့အကျင့်မျိုးစုံကိုလယ်ကွင်းထဲကနေလာမယ့်ကျနော်တို့ပိုကောင်းပြဿနာကိုနားလည်အဖြစ်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံမှမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မျှော်လင့်ချက်ကမ်းလှမ်းနေသည်။ စွဲလမ်းဆေးပညာနှင့် neuroscience ၏လယ်ပြင်တွင်သုတေသနနှင့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဆယ်စုနှစ်များစွာစွဲများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နောက်ခံဦးနှောက်ယန္တရားများထုတ်ဖေါ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များမသက်ဆိုင်သောပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူများ, စွဲလမ်း၏ဘုံ element တွေကိုထုတ်ဖော်, ဘုံစွဲလမ်းအပြုအမူကြောင့်ထိခိုက်လမ်းကြောင်းအဖြစ်စွဲနှင့် Non-စွဲတစ်ဦးချင်းစီ၏ဦးနှောက်အကြားကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်သိပ္ပံနည်းကျတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အထွေထွေအများသုံးဖြစ်ပြီး, အများပြည်သူမူဝါဒ, နှင့်ကုသမှုတိုးတက်လာနေဖြင့်နားလည်မှုအကြားတစ်ဦးကွာဟမှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
3) ဘာစွဲ (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် & Laier, 2015). ကောက်နှုတ်ချက်:
4) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ (Kraus et al ။, 2016). ကောက်နှုတ်ချက်:
DSM-5 အတွက်မပါဝင်ပေမယ့်, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါအဖြစ် ICD-10 အတွက်ရောဂါနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဆွေးနွေးငြင်းခုံ CSB ရဲ့ခွဲခြားအကြောင်းကိုတည်ရှိ။ အပိုဆောင်းသုတေသန CSB များအတွက်ကုသမှုရလဒ်များတူသောသက်ဆိုင်ရာအစီအမံ clinically ဆက်စပ်ပုံကို neurobiological features တွေနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦး '' အမူအကျင့်စွဲ '' အဖြစ် CSB ခွဲခြားမူဝါဒ, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုအားထုတ်မှုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်မယ်လို့ ... .. CSB နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုကိုအကြားအချို့တူညီအရစှဲများအတွက်ထိရောက်သောဆောင်ရွက်ချက်အရှင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွန်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို CSB ဘို့ဂတိတော်ကိုကိုင်စေခြင်းငှါ ဒီဖြစ်နိုင်ချေကိုတိုက်ရိုက်။
5) တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Compulsive သငျ့သလော (Kraus et al ။, 2016)။ ကောက်နှုတ်ချက်:
DSM-5 များလွှတ်ပေးရေးနှင့်အတူလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူ reclassified ခဲ့သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုစွဲသာစိတ်ကို-ပြောင်းလဲဝတ္ထုများ၏ ingesting နှင့်မူဝါဒ, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုမဟာဗျူဟာအဘို့အသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဖွငျ့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းယုံကြည်ချက်စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ဒေတာများကအခြားအပြုအမူတွေအတွက်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (ဥပမာဂိမ်းကစားခြင်း, လိင်, compulsive စျေးဝယ်) ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူလက်တွေ့မျိုးရိုးဗီဇ, neurobiological နှင့်ဖြစ်စဉ်မျဉ်းပြိုင်ဝေမျှစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပိုပြီးသုတေသနလိုအပ်နေနောက်ထပ်ဧရိယာနည်းပညာအပြောင်းအလဲများလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါဘယ်လိုစဉ်းစားပါဝငျသညျ။ ဒေတာ (ဥပမာ compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်လိင် chatrooms မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအင်တာနက်နှင့်စမတ်ဖုန်း applications များမှတစ်ဆင့် facilitated နေကြတယ်, နောက်ထပ်သုတေသန CSB ဆက်စပ်ပုံကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းအကြံပြုကြောင်းပေးထားနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက် (ဥပမာ condomless လိင်, မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက် ) တစ်ခါကပေါ်မှာ။
ထပ် features တွေ CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားတည်ရှိနေ။ ဘုံ neurotransmitter စနစ်များ CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ, မကြာသေးမီ neuroimaging လေ့လာမှုများတဏှာနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းတူညီမီးမောင်းထိုးပြ။ အလားတူ pharmacological နှင့် psychotherapeutic ကုသ CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစှဲဖို့သက်ဆိုင်သောဖြစ်နိုင်သည်။
6) Hypersexuality ၏ Neurobiological အခြေခံ (Kuhn & Gallinat, 2016). ကောက်နှုတ်ချက်:
အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အထူးသဖြင့် hypersexuality စွဲလမ်းအပြုအမူအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝအလျောက်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး system ပေါ်တွင်မှီခိုဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုသတိရသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မျိုးပွားများအတွက်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်ကတည်းကလိင်မျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လိင်ပျြောမှေ့စစဉ်းစားနဲ့ primal ကြိုးဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်လိင်အန္တရာယ်နှင့် counterproductive လမ်းအတွက်ကို လိုက်. စေခြင်းငှါအရာအချက်မှာစွဲသို့လှည့်နိုင်ပေမယ့်, စွဲလမ်းများအတွက်အာရုံကြောအခြေခံကတကယ်တော့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောရည်ရွယ်ချက်များအားဝတျပွုစခွေငျးငှါကြောင်းအလွန်အရေးကြီးပါသည် တစ်ဦးချင်းစီ၏ primal ရည်မှန်းချက်လိုက်စား ... ။ အတူတူယူအထောက်အထားဖြစ်စဉ်ကိုဆုလာဘ် hypersexuality ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သောတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးမြားတှငျပွောငျးလဲ, amygdala, hippocampus, hypothalamus, septum နှင့်ဦးနှောက်ဒေသများကြောင်းဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများနှင့် neuropharmacological ကုသမှုချဉ်းကပ်သည့် dopaminergic စနစ်၏တစ်ဦးပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာထောက်ပြတာပါ။
7) အင်တာနက်ပေါ်တွင်၏သက်ရောက်မှုနှင့်အခြားကိစ္စများ (: တစ်အပြုအမူစွဲအဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူGriffiths က, 2016). ကောက်နှုတ်ချက်:
ငါအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်စွဲလမ်း (စသည်တို့ကိုလောင်းကစားဝိုင်း, ဗီဒီယို-ဂိမ်း, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း, လေ့ကျင့်ခန်း, လိင်, အလုပ်,) သို့ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအချို့အမျိုးအစားများကိုလိင်စွဲလမ်းအဖြစ်တနျးနိုင်စောဒကတက်ခဲ့ကြ, ထိုအပေါ်သို့ မူတည်. စွဲလမ်း၏အဓိပ်ပါယျကိုအသုံးပြု ... ။
ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB), လိင်စွဲလမ်းနှင့် / သို့မဟုတ် hypersexual ရောဂါအဖြစ်ဖော်ပြနေသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောပုံမမှန်ပြုမူဆက်ဆံသူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်။ အကျိုးဆက်အားကူညီခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီပြုမူဆက်ဆံသောသူတို့အထဲကနေလက်တွေ့အထောက်အထားစိတ်ရောဂါအသိုင်းအဝိုင်းများက သာ. ကြီးမြတ်ယုံပေးထားရပါမည် ... ။
CSB နှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုနယ်ပယ်တွင်အရေးကြီးဆုံးသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာအင်တာနက်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် CSB ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာနိဂုံးချုပ်အပိုဒ်အထိဖော်ပြခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၊ အွန်လိုင်းလိင်စွဲမှုကိုလေ့လာခြင်း (ပင်ကိုယ်မူလအခြေခံအသေးများပါဝင်သည်) ၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်းနှစ်များ မှစ၍ လူ ဦး ရေ ၁၀,၀၀၀ နီးပါးအထိနမူနာအရွယ်အစားအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်အွန်လိုင်းလိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ကုသမှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း။ ပင်ကိုယ်မူလအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်မှုများရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ပတ်သက်။ စွဲလမ်းများလွယ်ကူချောမွေ့ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်စေခြင်းငှါအင်တာနက်၏တိကျသောအင်္ဂါရပ်များ (accessibility, တတ်နိုင်, အမည်ဝှက်, အဆင်ပြေ, လွတ်မြောက်, disinhibition, etc) ဖော်ပြထားပါပြီ။
8) ရွှံ့ရေအတွက်ရှင်းလင်းမှုများကိုရှာဖွေနေ: တစ်ခုကစွဲလမ်းအဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခွဲခြားများအတွက်အနာဂတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား (Kraus et al ။, 2016). ကောက်နှုတ်ချက်:
ကျနော်တို့မကြာသေးမီက non-ပစ္စည်းဥစ္စာ (အပြုအမူ) စွဲလမ်းအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ခွဲခြားဘို့သက်သေအထောက်အထားဆင်ခြင်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ် CSB ... ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတူလက်တွေ့ neurobiological နှင့်ဖြစ်စဉ်မျဉ်းပြိုင် shared ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး DSM-5 ထံမှ hypersexual ရောဂါပယ်ချခဲ့ပေမယ့်, CSB (အလွန်အကျွံလိင် drive ကို) ၏ရောဂါ ICD-10 သုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယင်း၏အဆုံးစွန်ပါဝင်အချို့မဟုတ်ပါဘူးပေမယ့် CSB ကိုလည်း ICD-11 နေဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိသည်။ အနာဂတ်သုတေသနအသိပညာတည်ဆောက်ရန်နှင့်တစ်ဦးပိုမိုနားလည် CSB များအတွက်မူဘောင်များနှင့်တိုးတက်သည့်မူဝါဒသို့ဤအချက်အလက်ဘာသာပြန်ဆိုကိုခိုင်ခံ့စေကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, ရောဂါနှင့် CSB ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု minimize လုပ်ဖို့ကုသမှုအားထုတ်မှုကိုဆက်လက်သငျ့သညျ။
9) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (ပန်းခြံ et al။ , 2016). porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်သောစာပေတစ်ခုကျယ်ပြန့်သုံးသပ်မှု။7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့်ဂယ်ရီ Wilson ကနှငျ့ပတျသကျသော, ထိုသုံးသပ်ချက်ကိုနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်ကြီးမားတဲ့မြင့်တက်ထုတ်ဖော်နောက်ဆုံးပေါ် data တွေကိုပေးပါသည်။ ဒါဟာအစကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှတဆင့်ညစ်ညမ်းစွဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ဆိုင်ရာအာရုံကြောလေ့လာမှုများသုံးသပ်ပြီး။ အဆိုပါဆရာဝန်များက porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးသောလူတို့၏3လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများသည်။ ဂယ်ရီ Wilson ကအားဖြင့်တစ်စက္ကန့် 2016 စက္ကူဘာသာရပ်များ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရှိခြင်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာ၏အရေးပါမှုကိုဆြေးြေိံး: ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖော်ပြမှနာတာရှည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပပျောက် (2016)။ ကောက်နှုတ်ချက်:
တခါကရှင်းပြသည်ယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်လာဘို့အကောင့်မှမလုံလောက်သောပေါ်လာကြောင်းရိုးရာအချက်များ, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုလျော့ကျနှင့် 40 အောက်မှာအမျိုးသားများတွင်ပူးပေါင်းလိင်စဉ်အတွင်းလိင်စိတ်လျော့။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို (1) မျိုးစုံ domains များအနေဖြင့်ဒေတာ, ဥပမာ, လက်တွေ့, ဇီဝဗေဒ (စွဲလမ်း / urology), စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်), လူမှုဗေဒဆိုင်ရာစဉ်းစား; နှင့် (2) ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖြစ်ရပ်ဆန်း၏အနာဂတ်သုတေသနတစ်ခုဖြစ်နိုင်သောဦးတည်ချက်အဆိုပြု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအတူလက်တွေ့အစီရင်ခံစာများတစ်စီးရီးတွေ့ရမယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်ပြောင်းလဲညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အခြေခံတဲ့ဖြစ်နိုင်သော etiology အဖြစ်စူးစမ်းနေကြသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုလည်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းရဲ့ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိ (အဆမဲ့အသစ်အဆန်းပိုမိုလွန်ကဲပစ္စည်း, ဗွီဒီယို format နဲ့, etc ရန်လွယ်ကူတင်းမာမှုများအတွက်အလားအလာ) အလွယ်တကူအစစ်အမှန်မှပြောင်းလဲမသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရှုထောင့်မှလိင်စိတ်နိုးထအခြေအနေဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းထက်ဖြစ်မည်အကြောင်းသက်သေအထောက်အထားစဉ်းစား တပ်မက်လိုချင်သောအဖက်များနှင့်အတူလိင်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အ arousal ငြင်းပယ်တွေ့ဆုံအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်မပြုစေခြင်းငှါဤကဲ့သို့သောကြောင်း -life မိတ်ဖက်။ လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရပ်စဲဘာသာရပ်များတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ variable ကိုဖယ်ရှားပစ်ရှိသည်သောနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ကျယ်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု reverse မှတစ်ခါတစ်ရံတွင်လုံလောက်သောကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
3.4 ။ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများမှ Related Neuroadaptations: ကျနော်တို့ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများဦးနှောက်ရဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ် hyperactivity နှင့် hypoactivity နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်ကြောင်း hypothesize [72, 129] နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏အာရုံကြောဆက်စပ်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ [31, 48, 52, 53, 54, 86, 113, 114, 115, 120, 121, 130, 131, 132, 133, 134].
10) သီးခြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှု Disorders ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကို Maintenance နှင့်စပ်လျဉ်းစိတ်ဓာတ်နှင့် Neurobiological ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေါင်းစပ်: ပုဂ္ဂိုလ်-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-execution model တစ်ခု Interaction (ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။, 2016)။ "အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ကြည့်ရှုရောဂါ" အပါအဝင်သီးခြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအခြေခံသည့်ယန္တယား၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ အဆိုပါစာရေးဆရာညစ်ညမ်းစွဲ (နှင့်ကျဘာစွဲ) အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုမမှန်အဖြစ်ခွဲခြားခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအဖြစ်ဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အောက်မှာအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူထားရှိစေခြင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
အဆိုပါ DSM-5 အင်တာနက်ကိုဂိမ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပေမယ့်, စာရေးဆရာတစ်ဦးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအရေအတွက်ကိုကုသမှု-ရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်းစွဲလမ်းသည်အခြား Internet application များသို့မဟုတ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုသုံးပါစေခြင်းငှါညွှန်ပြ ... ။
သုတေသန၏လက်ရှိအခြေအနေမှကျနော်တို့လာမည့် ICD-11 အင်တာနက်သုံးစွဲပုံမမှန်ထည့်သွင်းရန်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာအင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါတဘက်, applications များ၏အခြားအမျိုးအစားများပြဿနာလည်းအသုံးပြုကြသည်ကိုသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ တဦးတည်းချဉ်းကပ်မှု, ထို့နောက် (ဥပမာအင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ, အင်တာနက်-လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ, အင်တာနက်-ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါအသုံးပြုသောကြောင်းပထမရွေးချယ်မှု application ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမသတ်မှတ်နိုင်သည့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုရောဂါ၏အထွေထွေအသုံးအနှုန်းများ၏နိဒါန်းပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်ကြောင်း အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးရောဂါ, နှင့်အင်တာနက်-စျေးဝယ်ရောဂါ) ။
11) လိင်စွဲလမ်း၏ Neurobiology: စွဲ၏ Neurobiology ကနေအခန်း, အောက်စ်ဖို့ Press မှ (ဟီလ်တန် et al ။ , 2016) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ကျနော်တို့ ... သဘာဝကသို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်ကိုစွဲအပါအဝင်စွဲများအတွက် neurobiological အခြေခံ, ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, ပြီးတော့ဒီတစ်ဦးချင်းရဲ့ဘဝအတွက် function "စီမံထားခြင်းမရှိသော" ဖွစျလာနိုငျတဲ့သဘာဝအဆုလာဘ်အဖြစ်လိင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနားလည်မှုတို့နဲ့ဆက်စပ်ပုံကိုဆွေးနွေးပါ။
ဒါဟာစွဲလမ်း၏လက်ရှိနှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်နားလည်မှုဦးနှောက်သိတော့နှင့်အလိုရှိမည်သို့မည်ပုံနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာများပြုတ်ရည်နှင့်အတူအခြေစိုက်ပြောင်းလဲသွားပြီကြောင်းရှင်းပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲယခင်ကတစ်ခုတည်းကိုသာအမူအကျင့်စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသော်လည်း, ယခု neuromodulation ၏မှန်ဘီလူးမှတဆင့်ကိုလည်းမြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ မသို့မဟုတ်ဤသဘောတရားများကိုနားလည်မပေးနိုငျတစ်ဦးထက်ပိုအာရုံကြောရင်တော့မှားမယ်ရှုထောင့်မှမှီဝဲဆညျးကဆက်လက်နိုငျသျောလညျးဇီဝဗေဒ၏ဆက်စပ်အတွက်အပြုအမူနားမလည်နိုင်ကြသည်သောသူတို့အား, ဒီသစ်ကိုပါရာဒိုင်းအကြောင်းကြားထားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲတစ်ခု Integrated နှင့် functional ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ထောက်ပံ့သူများသည် အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဆရာနှစ်ဦးစလုံး။
12) Neuroscientific (အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲဖို့ချဉ်းကပ်Stark & ​​Klucken, 2017) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ညစ်ညမ်းပစ္စည်းရရှိမှုအင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူသိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပြင်းထန်မှုထိန်းချုပ်မှုထဲကကြောင့်ဤအမှုရလဒ်အဖြစ်ယောက်ျားကပိုမကြာခဏကုသမှုများအတွက်ကိုမေး; ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ ... သူတို့ကအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နေကြတယ်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ပြဿနာအမူအကျင့်ကိုရပ်တန့်သို့မဟုတ်လျှော့ချနိုင်မရှိကြပေ။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း, neuroscientific ချဉ်းကပ်မှု, အထူးသဖြင့်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) နဲ့အတော်ကြာလေ့လာမှုများ, စမ်းသပ်အခြေအနေများနှင့်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်အောက်မှာညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်၏အာရုံကြောဆက်စပ်လေ့လာစူးစမ်းဖို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ယခင်ရလဒ်များကပေးသော, အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပြီးသားပစ္စည်းဥစ္စာ-related စှဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေခံ neurobiological ယန္တရားများလူသိများဖို့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဦးအာရုံကြောအဆင့်တွင်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏ဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးသောလေ့လာမှုများ, အကျဉ်းချုံး။ longitudinal လေ့လာမှုမရှိခြင်းနေသော်လည်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာဝိသေသလက္ခဏာများရလဒ်မဟုတ်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။ လေ့လာမှုအများစုဟာပစ္စည်းဥစ္စာ-related စှဲ၏တွေ့ရှိချက်ကိုထင်ဟပ်သောထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက်ထက်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းဆီသို့အကျိုးကိုဆားကစ်အတွက်အားကောင်း cue reactivity ကိုသတင်းပို့ပါ။ ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်လျှော့ချ prefrontal-striatal-ဆက်သွယ်မှုကိုရည်မှတ်ရလဒ်များစွဲလမ်းအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးချို့ယွင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။
13) အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း (Potenza et al ။, 2017) - ကောက်နှုတ်ချက်:
(hypersexual ရောဂါအဖြစ် operationalized) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ DSM-5 အတွက်ပါဝင်ဘို့စဉ်းစားပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာဖယ်ထုတ်လိုက်, တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်ခြင်း၏မျိုးဆက်ပေမယ့်ခဲ့သည်။ ဤသည်ဖယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, သုတေသနနှင့်ကုသရေးအားထုတ်မှုနှောင့်နှေးခြင်း, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါများအတွက်တရားဝင်ရောဂါမရှိဘဲ Clinician ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ၏ neurobiology သို့သုတေသနအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု, မက်လုံးပေး salience အရည်အသွေးများနှင့်စှဲနှင့်အတူများပြားလှသောတူညီအကြံပြုကြောင်းဦးနှောက်-based cue reactivity ကိုပတ်သက်တွေ့ရှိချက်ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါတဏှာ, ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ, compulsive ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်လျော့နည်းသွားထိန်းချုပ်မှုကြားမှထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်လက်တဲ့အဆိုပြုထားအမြင်နှင့်ကိုက်ညီချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုကိုယ်စားပြု, ICD-11 အတွက်အရင်းခံတွန်းအား-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်အဆိုပြုနေပါသည်။ ဒီအမြင်အချို့ DSM-IV ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်များအတွက်အထူးရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသင့်လျော်သောပါပြီပေလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤဒြပ်စင်ရှည်လျားစှဲဖို့အလယ်ပိုင်းစဉ်းစားခဲ့ကြခြင်း, DSM-5 မှ DSM-IV ကနေအကူးအပြောင်းအတွက်အခြားသောခွဲခြားမ Impulse Control ကို Disorders ၏အမျိုးအစားတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်အမည်ပြောင်းနှင့် reclassified ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူ, restructured ခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်, ICD-11 beta ကိုမူကြမ်းဆိုဒ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်စာရင်းပြုစုခြင်း, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ, pyromania, kleptomania နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါပါဝင်သည်။
14) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ Neurobiology - တစ်ဦးကလက်တွေ့သုံးသပ်မှု (De Sousa & Lodha, 2017) - ကောက်နှုတ်ချက်:
အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုပထမဦးဆုံးအဆိုစွဲအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်အခြေခံဆုလာဘ်တိုက်နယ်နဲ့အဆောက်အဦများနှင့်အတူစွဲ၏အခြေခံ neurobiology ကြည့်ပါတယ်။ အဆိုပါအာရုံစိုက်ပြီးတော့ညစ်ညမ်းစွဲဆီသို့ပြောင်းရွှေ့ရသည်နှင့်အခြေအနေကို၏ neurobiology အပေါ်ပြုမိလေ့လာမှုများပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်။ ညစ်ညမ်းစွဲအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို MRI လေ့လာမှုများပေါ်တွင်တွေ့မြင်အဖြစ်အချို့သောဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ fMRI လေ့လာမှုများညစ်ညမ်းပါသည်နောက်ကွယ်မှမှ neuroscience လေ့လာဖို့ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ကြနှင့်ဤလေ့လာမှုများကနေတွေ့ရှိချက်မီးမောင်းထိုးပြနေကြသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအမိန့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအပေါ်ညစ်ညမ်းစွဲ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းအလေးပေးသည်။
စုစုပေါင်း 59 ဆောင်းပါးများသုံးသပ်ချက်များ, mini ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်ညစ်ညမ်းပါသည်, စွဲလမ်းနှင့် neurobiology များ၏ကိစ္စရပ်များတွင်မူရင်းသုတေသနစာတမ်းများထည့်သွင်းထားတဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါသုတေသနစာတမ်းများညစ်ညမ်းစွဲများအတွက် neurobiological အခြေခံ elucidated သောသူတို့အပျေါဗဟိုပြုခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့သင့်လျော်သောစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူလျောက်ပတ်နမူနာအရွယ်အစားနှင့်အသံကနည်းစနစ်ခဲ့ကြောင်းလေ့လာမှုများပါဝင်သည်။ အချို့နည်းပါးလာသင်တန်းသားများနှင့်အတူလေ့လာမှုများ, ကိစ္စတွင်စီးရီး, အမှုအစီရင်ခံစာများနှင့်လည်းဤစာတမ်းများအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့အရည်အသွေးလေ့လာမှုများရှိခဲ့သည်။ လူအပေါင်းတို့သည်စာတမ်းများနှင့်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာသူတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်စာရေးသူနှစ်ဦးစလုံးသည်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာနောက်ထပ်ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်ကြည့်ရှုမယ့်စိတ်ပျက်စရာလက္ခဏာသည်အဘယ်မှာရှိလူနာများနှင့်အတူပုံမှန်အလုပ်မလုပ်သူစာရေးဆရာနှစ်ဦးစလုံး၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလက်တွေ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ စာရေးသူလည်း neurobiological နားလည်မှုတန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်ထားသောဤလူနာနှင့်အတူ psychotherapeutic အတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။
15) အဆိုပါ Pudding ၏သက်သေပြချက်အရသာအတွက် Is: ဒေတာများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Compulsive မှ & Models နှင့်ယူဆချက်ဆက်စပ်စုံစမ်းဖို့လိုအပျနသေ (Gola & Potenza, 2018) - ကောက်နှုတ်ချက်:
တခြားနေရာ (Kraus, Voon နှင့် Potenza) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း 2016a) ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် CSB နှင့်ပတ်သက်သောစာစောင်များသည် ၁၁,၄၀၀ ကျော်အထိတိုးများလာသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ CSB ၏သဘောတရားနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံမေးခွန်းများမှာအဖြေမရရှိသေးပါ (Potenza, Gola, Voon, Kor, & Kraus, 2017) ။ ဒါဟာဘယ်လို DSM နှင့်စဉ်းစားရန်သက်ဆိုင်ရာလိမ့်မယ် ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး (ICD) ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်ခွဲခြားဖြစ်စဉ်များမှလေးစားမှုနှင့်အတူလည်ပတ်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာတှငျကြှနျုပျတို့ကလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (လည်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ်လူသိများ) နှင့်ဘယ်လို DSM-IV နှင့် DSM-5 အတွက် (အဖြစ် ICD-10 နှင့်လာမည့် ICD-11 အတွက်) ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ DSM-IV အတွက်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ပါတယ် "အခြားသောခွဲခြားမ Impulse-ထိန်းချုပ်ရေး Disorder ။ " DSM-5 ခုနှစ်တွင်, တကအဖြစ် reclassified ခဲ့ပါတယ် "ပစ္စည်း-Related နှင့်စွဲခြင်းရောဂါ။ " ... ။ အလားတူချဉ်းကပ်နည်းသည်လက်ရှိတွင် ICD-11 (Grant က et al အတွက်အရင်းခံတွန်းအား-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်ပါဝင်ဘို့စဉ်းစားလျက်ရှိသော CSB မှလျှောက်ထားရပါမည်။ , 2014; Kraus et al ။ , 2018) ... ။
CSB နှင့်စွဲလမ်းမမှန်အကြားတူညီအကြံပြုစေခြင်းငှါ၎င်း domains များအကြားဝေါ်လ်တန် et al အားဖြင့်ချန်လှပ်အများအပြားမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများနှင့်အတူလေ့လာမှုများ, neuroimaging နေကြသည်။ (2017) ။ ကန ဦး လေ့လာမှုများသည်ဆေးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ CSB ကိုမကြာခဏဆန်းစစ်လေ့ရှိသည် (Gola, Wordecha, Marchewka, & Sescousse တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်) 2016b; Kraus, Voon & Potenza, 2016b) ။ ထင်ရှားသောမော်ဒယ်ဖြစ်သည့်မက်လုံးပေးလွန်းခြင်းသီအိုရီ (Robinson & Berridge, 1993) - စွဲလမ်းမှုရှိသူများအနေဖြင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများသည်ပြင်းထန်သောမက်လုံးများတန်ဖိုးများကိုရရှိပြီးတပ်မက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှု ventral striatum အပါအဝင်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ ဦး နှောက်ဒေသများ၏ activation ဆက်စပ်လိမ့်မည်။ cue ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအပြောင်းအလဲများကိုအကဲဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းများသည်သီးခြားအုပ်စုများ (Sescousse, Barbalat, Domenech, & Dreher) ကိုအထူးဂရုပြုမှု (ဥပမာ - ငွေကြေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်ခေါ်ယူခြင်း) ကိုစုံစမ်းရန်အတွက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ 2013), နှင့်ကျွန်တော်မကြာသေးမီကလက်တွေ့နမူနာ (Gola et al လေ့လာရန်ဤတာဝန်လျှောက်ထားခဲ့ကြ။ , 2017) ။ ကျနော်တို့ကိုက်ညီနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ (အသက်, လိင်, ဝင်ငွေ, ယာနျဘာသာတရားကို, မိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ပမာဏ, လိင်စိတ်နိုးထနေဖြင့်), တစ်ဦးချင်းစီပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်ကုသမှုရှာကြံတွေ့ရှိခဲ့ခေါ်ဆောင်သွား၏တွေကိုတိုးပွားလာ ventral striatal reactivity ကိုပြသ ဆုလာဘ်, ဒါပေမယ့်မရဆက်စပ်ဆုလာဘ်အဘို့နှင့်မငွေကြေးဆိုင်ရာတွေကိုနှင့်ဆုလာဘ်သည်။ ဦးနှောက် reactivity ကိုဒီပုံစံဟာမက်လုံးပေး salience သီအိုရီနှင့်အညီဖြစ်ပြီး CSB ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ်ပိုင်းတွင်ကြားနေတွေကိုအားဖြင့်သွေးဆောင် cue reactivity ကိုသို့မဟုတ်တဏှာပါဝင်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ အပိုဆောင်းဒေတာကိုအခြားဦးနှောက်ဆားကစ်နှင့်ယန္တရားများ CSB တွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအကြံပြု, ဤ anterior cingulate, hippocampus နှင့် amygdala (BANCA et al ပါဝင်နိုင်သည်။ , 2016; Klucken, Wehrum-Osinsky, Schweckendiek, Kruse & Stark, 2016; Voon et al ။ , 2014) ။ ဤရွေ့ကားများထဲတွင်ကျနော်တို့ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက်မြင့်မားသောဓာတ်ပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောတိုးချဲ့ amygdala ဆားကစ်အထူးသဖြင့်ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည် (Gola, Miyakoshi & Sescousse, 2015; Gola & Potenza, 2016) ထိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုမြင့်မားနှင့်အတူ ရှိနေ. အချို့ CSB တစ်ဦးချင်းစီ (Gola et al လေ့လာရေးအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ , 2017) နှင့် CSB ရောဂါလက္ခဏာများကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ pharmacological လျှော့ချရေးနှင့်အတူလျှော့ချနိုင်ပါသည် (Gola & Potenza, 2016) ...
16) အဆိုပါ ICD-11 (ထဲမှာ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ: ပညာရေးဆိုင်ရာ, ခွဲခြား, ကုသမှုနှင့်အပေါ်မူဝါဒရေးရာချမှတ် Commentary မြှင့်တင်Kraus et al။ , 2018) - ကမ္ဘာ့အများဆုံးအသုံးများဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေလက်စွဲ, ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "ကောက်နုတ်ချက်:
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ မိသားစု၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့မဟုတ်အခြားအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပြင်းထန်သော၊ ထပ်ခါတလဲလဲလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်တိုက်တွန်းမှုများကိုအမြဲတစေအခက်တွေ့နေသောအခက်အခဲများသို့မဟုတ်ရှုံးနိမ့်မှုများကိုကြုံတွေ့ရသူများစွာအတွက်၊ သူတို့ရဲ့ပြproblemနာကိုအမည်နှင့်ဖေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်။ တစ် ဦး ချင်းစီအကူအညီတောင်းခံနိုင်သောစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ (ဆိုလိုသည်မှာဆရာ ၀ န်များနှင့်တိုင်ပင်သူများ) သည် CSB များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ CSB အတွက်ကုသမှုခံယူရန်ဘာသာရပ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ပါဝင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများအရ CSB ခံစားနေရသောသူများသည်အကူအညီတောင်းရန်သို့မဟုတ်ဆရာ ၀ န်များနှင့်ဆက်သွယ်စဉ်အတားအဆီးများစွာကြုံတွေ့ရကြောင်းမကြာခဏကြားသိခဲ့ရသည် (Dhuffar & Griffiths, 2016) ။ လူနာများထိုကဲ့သို့ပြဿနာများတည်ရှိ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကိုရှိပါတယ်, ဤလူတစ်ဦးချင်းစီသည်ကြားမှ (ကုသအစားလက်ခံသင့်တယ်အကြံပြုမပြည်နယ်, Clinician ခေါင်းစဉ်ကိုရှောင်ကြဉ်စေခြင်းငှါသတင်းပို့သည် CSBs အတ္တ-dystonic နှင့်ခဲခံစားရပေမည် ) မျိုးစုံအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ CSB ရောဂါများအတွက်ကောင်းစွာ-သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများ CSB ရောဂါ၏လက္ခဏာများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အပါအဝင်ပညာရေးဆိုင်ရာအားထုတ်မှုမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်များအတွက်လေ့ကျင့်ရေး, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများ၏အခြားပံ့ပိုးပေးအဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောအထွေထွေသမားအဖြစ်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအပါအဝင်အခြားအစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
17) လူသားတွေဟာနှင့် Preclinical & Models (2018) တွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ - ကောက်နှုတ်ချက်:
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ကျယ်ပြန့် ", အမူအကျင့်စွဲ" ဟုအဖြစ်မှတ်ခြင်းနှင့်အသက်တာ၏အရည်အသွေးနှင့်နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအဓိကခြိမ်းခြောက်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် CSB တစ် diagnosable ရောဂါအဖြစ်ဆေးခန်းအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့နှောင့်နှေးခဲ့သညျ။ CSB အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်အဖြစ်ဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူပူးတွဲနေကြလို့ပဲဖြစ်တယ်, မကြာသေးမီ neuroimaging လေ့လာမှုများစိတ်ခွန်အားနိုး salience နှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုထိန်းချုပ်ရန်အထူးသဖြင့်ဦးနှောက်ဒေသများအတွက်က Shared သို့မဟုတ်ထပ်အာရုံကြောရောဂါဗေဒမမှန်သရုပ်ပြပါပြီ။ လက်တွေ့ neuroimaging လေ့လာမှုများ prefrontal cortex, amygdala, striatum နှင့် CSB ခံစားနေရပြီးတစ်ဦးချင်းစီအတွက် thalamus အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးနှင့် / သို့မဟုတ် function ကိုအပြောင်းအလဲများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်။ အထီးကြွက်များတွင် CSB များ၏အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပြုလေ့လာဖို့တစ်ဦးက preclinical မော်ဒယ်လူသိများအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရှာဆန်းစစ်ဖို့အေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါဝင်သည်ဟုဆွေးနွေးထားတယ်။
အခြားအ compulsive မမှန်, အမည်ရ, မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်အတူ CSB ရှယ်ယာဝိသေသလက္ခဏာများသောကြောင့်, CSB အတွက်တွေ့ရှိချက်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲဘာသာရပ်များ၏နှိုင်းယှဉ်ဤရောဂါ၏ comorbidity ဖြန်ဖြေဘုံအာရုံကြောရောဂါဗေဒကိုသိရှိနိုင်ဖို့အဖိုးတန်ပေမည်။ အမှန်စင်စစ်, များစွာသောလေ့လာမှုတွေ CSB နှင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေး [87-89] ကိုအသုံးပြုဖို့နှစ်ဦးစလုံးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု limbic အဆောက်အဦများအတွင်းအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်သွယ်မှုအလားတူပုံစံများကိုပြသခဲ့ကြသည်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဒီသုံးသပ်ချက်အမူအကျင့်များနှင့် neuroimaging လူ့ CSB အပေါ်လေ့လာမှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်အခြားရောဂါများနှင့်အတူ comorbidity အကျဉ်းချုံး။ အတူတကွဤလေ့လာမှုများ CSB အပြင် amygdala နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားရန်, dorsal anterior cingulate နှင့် prefrontal cortex, amygdala, striatum နှင့် thalamus အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထိုမှတပါး, အထီးကြွက်များတွင် CSB များအတွက် preclinical မော်ဒယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်း mPFC နှင့် OFC အတွက်အာရုံကြောကိုပြောင်းလဲသစ်သက်သေအထောက်အထားများအပါအဝင်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ဤသည် preclinical မော်ဒယ်ဓာတ်နှင့် CSB နှင့်အခြားရောဂါများနှင့်အတူ comorbidity ၏နောက်ခံအကြောင်းတရားများကိုသိရှိနိုင်ဖို့အဓိကသော့ချက်ယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။
18) အင်တာနက်ကိုခေတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2018) - ကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
19) အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (2018) တွင် Neurocognitive ယန္တရားများ - ကောက်နှုတ်ချက်:
နေ့စွဲစေရန်, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အများဆုံး neuroimaging သုတေသနထပ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအခြေခံယန္တရားနှင့် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲအထောက်အထားပေးအပ်ထားပါတယ်။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပစ္စည်းဥစ္စာ, လောင်းကစားများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစှဲနဲ့တူပုံစံများအတွက် sensitive ကလေ့, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ dyscontrol နှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေဦးနှောက်ဒေသများနှင့်ကွန်ရက်များအတွက်ပြောင်းလဲလည်ပတ်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ CSB features တွေချိတ်ဆက် Key ကိုဦးနှောက်ဒေသများအတွက်နျူကလိယ accumbens အပါအဝင်တိုကျရိုကျနှင့်ယာယီ cortical, amygdala နှင့် striatum, ပါဝင်သည်။
CSBD ၏လက်ရှိဗားရှင်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည်ICD-11 တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါ  အဖြစ်။ အဆိုပါ WHO ကအားဖြင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, 'Impulse-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်ထိုကဲ့သို့သောရှည်အဖြစ်အကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းတစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ခုခံတွန်းလှန်မောင်းထုတ်, ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးရေတိုရေရှည်အတွက်လူတစ်ဦးမှအကြိုးကြောင်းတစ်ခုလုပ်ရပ်ဖျော်ဖြေဖို့တိုက်တွန်းဖို့အကြိမ်ကြိမ်ပျက်ကွက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနေကြတယ် သည်တစ်ဦးချင်းစီမှသို့မဟုတ်အခြားသူများအားဖြစ်စေထိခိုက်စေသည့်အပြုအမူပုံစံအကြောင်းကိုဒုက္ခဆင်းရဲမှတ်သား, ဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, မိသားစု, လူမှုရေး, ပညာရေး, လုပ်ငန်းခွင်, ဒါမှမဟုတ်  '' functioning ၏အခြားအရေးကြီးသောဒေသများရှိသိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်း -term ။ လက်ရှိတွေ့ရှိချက် CSBD ၏ခွဲခြားနှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသောမေးခွန်းတွေတင်ပြထားတယ်။ ချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအတော်များများမမှန်တခြားနေရာထဲမှာခွဲခြားထားပါသည် ICD-11 (ဥပမာ, လောင်းကစား, ဂိမ်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်စွဲလမ်းပုံမမှန်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်)  ။
20) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (2018) ၏အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ၏တစ်ဦးကလက်ရှိနားလည်မှု - ကောက်နှုတ်ချက်:
မကြာမီက neurobiological လေ့လာမှုများ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေပြောင်းလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဟုထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။
အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်သောကြောင့်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များတွင်အကျဉ်းချုပ်တွေ့ရှိချက် [(CSBD တွေ့ရှိအများအပြားမူမမှန်ဝေမျှထားတဲ့အမူအကျင့်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-related စှဲနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာတူညီအကြံပြု127]) ။ [: ပစ္စုပ္ပန်အစီရင်ခံစာ၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်သော်လည်း, ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း, ပုဂ္ဂလဒိဋ္အမူအကျင့်များနှင့် neurobiological အစီအမံ (Overview နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်ရည်ညွှန်းပြောင်းလဲ cue reactivity ကိုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်း128, 129, 130, 131, 132, 133]; အရက်: [134, 135]; ကိုကင်း: [136, 137]; ဆေးရွက်ကြီး: [138, 139]; လောင်းကစားဝိုင်း: [140, 141]; ဂိမ်းကစားခြင်း: [142, 143]) ။ CSBD နှင့်အခြားစှဲအကြားငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြပွဲတူညီရည်မှတ်ရလဒ်များ [144, 145].
CSBD ၏အနည်းငယ် neurobiological လေ့လာမှုများယနေ့အထိကျင်းပပြီးစီးခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလက်ရှိဒေတာထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းမမှန်ကဲ့သို့သောအခြားဖြည့်စွက်အတူ neurobiological မူမမှန်ရှယ်ယာ Community အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိဒေတာသည်၎င်း၏ခွဲခြားတဲ့အမူအကျင့်စွဲထက်တစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်ပိုကောင်းတော်ပါတယ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
21) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် Ventral Striatal reactivity (2018) - ကောက်နှုတ်ချက်:
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ကုသမှုရှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီအဖြစ်မှန်ပေး CSB အပေါ်လေ့လာချက်များ၏အရေအတွက်သည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များတွင်သိသိသာသာတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကရှုထောကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ် မှစ. , က CSB ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရကျိုးနပ်သည် ...... လာမည့် ICD-11 ၎င်း၏အဆိုပြုချက်ကိုအတွက် CSB ပါဝင်သည် (1) ကြီးစိုးလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, နှင့် (2) ကြီးစိုးတိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့် (နှစ်ခုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ Subtype သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်48, 49).
ရရှိနိုင် CSB အပေါ်လေ့လာမှုများ (နှင့်မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူ Sub-လက်တွေ့လူဦးရေ) ၏ငွေပမာဏကိုအဆက်မပြတ်တိုးမြှင့်ထားသည်။ လက်ရှိရရှိနိုင်လေ့လာမှုများတွေထဲမှာကျနော်တို့ကိုးစာပမြေား (ဇယားကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ် 1) အရာအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အသုံးပြုသွားမည်။ ဤအရာလေး (သာ36-39) တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုနှင့် / သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ventral striatum Active နှင့်ဆက်စပ်သောတွေ့ရှိချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ သုံးလေ့လာမှုများ (ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်တိုးမြှင့ ventral striatal reactivity ကိုညွှန်ပြ36-39) သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုခန့်မှန်းတွေကို (36-39) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ယ့ Salience သီအိုရီ (IST) (နှင့်ကိုက်ညီများမှာ28), စွဲလမ်းအတွက်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာဖော်ပြအထင်ရှားဆုံးမူဘောင်တွေထဲက။ စွဲလမ်းအတွက် ventral striatum ၏ hypoactivation ခန့်မှန်းထားတဲ့အခြားသီအိုရီမူဘောင်, RDS သီအိုရီ (များအတွက်သာထောက်ခံမှု29, 30), (တဦးတည်းလေ့လာမှုကနေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလာ37), ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အောက်ပိုင်း ventral striatal activation တင်ပြရှိရာ။
22) အွန်လိုင်း Porn စွဲ: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့သိပါနှင့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ Don't-တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (2019)- ကောက်နှုတ်ချက်:
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း, အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်ပတ်သက်သောဆောင်းပါးများကိုတစ်လှိုင်းရှိခဲ့သည်; သူတို့ထဲကတချို့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်တစ်ဦးအာရုံရှိသည်။ သို့သော်အားလုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများရှိနေသော်လည်း, ငါတို့နေဆဲဒီအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျးရောဂါဗေဒဖြစ်လာသည့်အခါကိုယ်ရေးအချက်အလက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုံပြဿနာများပါဝင်သည်: အလွန်ကွဲပြားခြားနား symptomatology နှင့်အတူသူ့ဟာသူကိုတင်ပြစေခြင်းငှါနမူနာဘက်လိုက်မှု, ရောဂါရှာဖွေ Instruments များအတွက်ရှာဖွေမှု, ဒီကိစ္စကိုမှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဆန့်ကျင်, ဤ entity ကြီးမြတ်သောရောဂါဗေဒအတွင်းပိုင်းဝိုငျးစေခြင်းငှါအချက်ကို (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်စွဲ) ။ အမူအကျင့်စှဲလေ့လာမှုတစ်ခုအကြီးအကျယ် unexplored လယ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်နှင့်များသောအားဖြင့်တစ်ဦးပြဿနာစားသုံးမှုပုံစံပြ: ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး, ချွတ်ယွင်းခြင်း, အန္တရာယ်များအသုံးပြုခြင်း။ Hypersexual ရောဂါကဒီမော်ဒယ်ကိုက်ညီနှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း (POPU) ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့အများအပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ရေးစပ်နိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုက "သုံးဆတစ်ဦးက" သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (အသုံးပြုနိုင်စွမ်း, တတ်နိုင်, အမည်ဝှက်) စဉ်းစားစွဲများအတွက်အလားအလာနှင့်အတူမြင့်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာပြဿနာအသုံးပြုမှုအထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့လူဦးရေကြားတွင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။
23) အွန်လိုင်း porn စွဲ၏ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး: လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များ, ခိုင်ခံ့စေယန္တရားများနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများ (2019) တစ်ဦးချင်းစီ - ကောက်နှုတ်ချက်:
Initiative နှင့်ကျဘာစွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဂန္ထဝင်အေးစက်နှင့်အော်ပရေတာအေးစက်နှင့်အတူနှစ်ဦးကိုအဆင့်ဆင့်ရှိသည်။ ပထမဦးစွာတစ်ဦးချင်းစီဖျော်ဖြေရေးနှင့်သိချင်စိတ်ထဲကရံဖန်ရံခါကျဘာကိုသုံးပါ။ ဤအဆင့်တွင်, အင်တာနက်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်း, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ဂန္ထဝင်အေးစက်အတွက်ရလဒ်နှင့်အတူပြင်းထန်သောတဏှာဖြစ်ပေါ်ရာဘာ-related တွေကိုာင်းမှထပ်မံဆောင်တွဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းအားနည်းချက်များလည်းကျဘာ-related တွေကိုာင်းလွယ်ကူချောမွေ့။ ဒုတိယအဆင့်တွင်တွင်, တစ်ဦးချင်းစီကျဘာ၏အသုံးပြုမှုကိုမကြာခဏသူတို့၏လိင်ပိုင်းအလိုဆန္ဒများကိုကျေနပ်အောင်သို့မဟုတ်ဤဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်အတွင်းရန်, ဘာ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်မျှော်လင့်တူသောကျဘာ-related သိမြင်ဘက်လိုက်မှုနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အသုံးပြုတူသောယန္တရားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအပြုသဘော, ဆက်စပ်သူတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးစရိုက်များအားဖြည့်နေကြပါစေ လိင်၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုလည်းအပြုသဘောကွောကျ, အနိမ့် Self-လေးစားမှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါများကဲ့သို့ psychopathologies တူသောဘုံကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်စဉ်အားဖြည့်နေကြသည်ထိုကဲ့သို့သော narcissism, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံရှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဖြစ်ကျဘာစွဲနှင့်တကွ, စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆိုးအားဖြည့်နေကြသည်။ အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုလိုငွေပြမှုရေရှည်ကျဘာအသုံးပြုမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုလိုငွေပြမှုနှင့်ပြင်းထန်သောတဏှာ၏အပြန်အလှန်ကျဘာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအားပေးအားမြှောက်။ ဘာစွဲလေ့လာဖို့အဓိကအား electrophysiological နှင့်ဦးနှောက်ပုံရိပ် tools တွေကိုသုံးပြီး Research ကျဘာ-related တွေကိုရင်ဆိုင်နေရသည့်အခါကျဘာစွဲဘာများအတွက် ပို. ပို. အားကောင်းတဏှာဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါရှာတွေ့ပေမယ့်အသုံးပြုတဲ့အခါသူတို့လျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းသာယာသောခံစားကြရသည်။ လေ့လာရေးကျဘာ-related တွေကိုအားဖြင့်အစပျိုးပြင်းထန်သောတဏှာနှင့်ချို့ယွင်းအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအဘို့သက်သေသာဓကသည်။ နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဘာစွဲမှအားနည်းချက်နေသောလူမျိုးဘာဘာနှင့်ချို့ယွင်းအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုများအတွက် ပို. ပို. ပြင်းထန်သောတဏှာမှထွက်ကိုအသုံးကိုရပ်တန့်မနိုင်ပေမယ့်အသုံးပြုတဲ့အခါသူတို့လျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းကျေနပ်မှုခံစားရတယ်နှင့် ပို. ပို. မူရင်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းများရှာဖွေ အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံများများ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအွန်လိုင်း။ သူတို့ဘာအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ရုံကထွက်ပြီးတာနဲ့သူတို့စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, စိုက်ထူကမောက်ကမဖြစ်မှု, လိင်စိတ်နိုးထမရှိခြင်းနဲ့တူဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများတဲ့စီးရီးထဲကနေဆင်းရဲခံရလိမ့်မယ်။
24) သီအိုရီ, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါ (2019) ၏ကုသမှု - ကောက်နှုတ်ချက်:
ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပါအဝင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါအဖြစ် ICD-11 တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဥပမာအားထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို person's အသက်တာ၏ဗဟိုအာရုံဖြစ်လာဒီရောဂါများအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံ, သို့သော်, သိသိသာသာထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလျှော့ချရန်နှင့်ရှိနေသော်လည်းထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဆက်လက်ရန်မအောင်မြင်အားထုတ်မှုစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကြောင့်ပုံမမှန်များအတွက်စံရန်အလွန်ဆင်တူ အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ (WHO က, 2019) ကြုံနေရ။ အတော်များများကသုတေသီများနှင့် Clinician လည်းပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ငြင်းခုန်။
လျှော့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ပေါင်းစပ် Cue-reactivity ကိုနှင့်တဏှာ, သွယ်ဝိုက်သိမြင်မှု (ဥပမာချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကို) နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ဆန္ဒပြည့်နှင့်လျော်ကြေးကြုံနေရညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုကိုရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သရုပ်ပြပါပြီ။ Neuroscientific လေ့လာမှုများပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ventral striatum နှင့်နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal ကွင်း၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်စွဲ-related ဦးနှောက်ဆားကစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု, အတည်ပြုပါ။ ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာများနှင့်အထောက်အထား-of concept ကိုလေ့လာမှုများညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုကုသဘို့, ဥပမာ, opioid ရန် naltrexone pharmacological ကြားဝင်များ၏ထိရောက်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားစွဲလမ်းမမှန်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ယန္တရားများညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါအတွက်လည်းတရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
25) ကိုယ်တိုင် - ရိပ်မိပြProbleနာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှု - သုတေသနဒိုမိန်းလိုအပ်ချက်နှင့်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာရှုထောင့်မှပေါင်းစည်းထားသောပုံစံ (2019) - ကောက်နုတ်ချက်များ
ကိုယ်တိုင် - ရိပ်မိပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမျိုးမျိုးယူနစ်နှင့်သက်ရှိအမျိုးမျိုးရှိစနစ်များနှင့်ဆက်စပ်နေပုံရသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော RDoC ပါရာဒိုင်းအတွင်းတွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ ကွဲပြားခြားနားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုယူနစ်များအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည့်စည်းလုံးသောပုံစံတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်သည် (ပုံ - ၁) ။ လိင်မှုကိစ္စနှင့်အော်ဂဇင်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆုလာဘ်စနစ်၏သဘာဝကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်မြင့်မားသော dopamine ပမာဏသည် SPPPU ကိုသတင်းပို့သောသူများ၏ VTA-NAc စနစ်၏စည်းမျဉ်းများနှင့်အနှောင့်အယှက်ပေးပုံရသည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပျက်ပြယ်သွားခြင်းသည်ဆုလာဘ်စနစ်ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများတိုးပွားလာစေခြင်း၊
အလွယ်တကူအလွယ်တကူရရှိနိုင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဆက်လက်ထိတွေ့ခြင်းသည် mesolimbic dopaminergic system တွင်အချိုးမညီမျှမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤပိုလျှံသော dopamine သည် GABA output လမ်းကြောင်းများသို့တက်ကြွစေသည် dopamine neuron များကိုတားဆီးပေးသော dynorphin ကိုဘေးထွက်ပစ္စည်းအဖြစ်ထုတ်လုပ်သည်။ dopamine လျော့နည်းသွားသောအခါ acetylcholine ထွက်လာပြီးအခြေအနေဆိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ (Hoebel et al ။ 2007) စွဲပုံစံများ၏ဒုတိယအဆင့်တွင်တွေ့ရသောအနုတ်လက္ခဏာဆုလာဘ်စနစ်ကိုဖန်တီးသည်။ ဤမညီမျှမှုသည်ချဉ်းကပ်မှုမှရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူများသို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ SPPPU ရှိသူများအကြားအတွင်းပိုင်းနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာယန္တရားများပြောင်းလဲခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်တွေ့ရသူများနှင့်ဆင်တူသည်။ စွဲလမ်းမှုပုံစံများကိုမြေပုံရေးဆွဲသည် (Love et al ။ 2015) ။
26) Cybersex စွဲ - အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါအသစ်တစ်ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုသမှုခြုံငုံသုံးသပ်ချက် (၂၀၂၀) - ကောက်နှုတ်ချက်:
Cybersex စွဲသည်အင်တာနက်မဟုတ်သောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်သောပစ္စည်းမဟုတ်သောစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လိင်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအမျိုးမျိုးကိုအင်တာနက်မီဒီယာများမှအလွယ်တကူရနိုင်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်လိင်မှုကိစ္စကိုပုံမှန်အားဖြင့်တားမြစ်သည်ဟုယူဆကြသော်လည်းလူငယ်အများစုသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းခံကြရသည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ဆက်နွယ်မှု၊ ငွေ၊ အဓိကစိတ်ကျဝေဒနာနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါများစသည့်စွဲလမ်းစေနိုင်သည်။
27) မည်သည့်အခြေအနေများကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း (ICD-11) တွင်“ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများကြောင့်အခြားသတ်မှတ်ထားသောရောဂါများ” ဟုသတ်မှတ်သင့်သနည်း။ (၂၀၂၀) - စွဲစွဲလမ်းလမ်းပညာရှင်များ၏သုံးသပ်ချက်အရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းရောဂါသည် ICD-11 အမျိုးအစား "စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကြောင့်အခြားသတ်မှတ်ထားသောရောဂါများ" ကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားအသိအမှတ်ပြုစွဲလမ်းမှုများနှင့်တူသည်။ ကောက်နုတ်ချက်များ
လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာပြseနာ ICD-11 အမျိုးအစားတွင် Impul-control Disorders တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအမျိုးမျိုးတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများပါ ၀ င်နိုင်သည်အမှတ်တံဆိပ်, Blycker, & Potenza, 2019; Kraus et al ။ , 2018) ။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ၏ခွဲခြားငြင်းခုံခဲ့သည် (Derbyshire & Grant က, 2015အချို့သောစာရေးသူများကမူစွဲလမ်းမူဘောင်သည် ပို၍ သင့်လျော်ကြောင်းအကြံပြုသည်။Gola & Potenza, 2018အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများခံစားနေရသောတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်သော၊Gola, Lewczuk, & Skorko, 2016; Kraus, Martino, & Potenza, 2016).
ဂိမ်းပြorderနာများအတွက်ရောဂါရှာဖွေရေးလမ်းညွှန်များသည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာမမှန်မှုများအတွက်အင်္ဂါရပ်များစွာကိုမျှဝေထားပြီး“ ဂိမ်း” ကို“ အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း” သို့ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်မွေးစားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအဓိကအင်္ဂါရပ်သုံးခုကိုပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအတွက်အဓိကစဉ်းစားထားသည် (အမှတ်တံဆိပ်, Blycker, et al ။ , 2019) နှင့်သင့်လျော်သောအခြေခံထည့်သွင်းစဉ်းစား fit မှပုံပေါ် (သဖန်းသီး။ 1) ။ လေ့လာမှုအတော်များများသည်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏လက်တွေ့ကျမှု (စံနှုန်း ၁) ကိုပြသခဲ့သည်။ နေ့စဉ်အသက်တာတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေခြင်း၊Gola & Potenza, 2016; Kraus, Meshberg-Cohen, Martino, Quinones, & Potenza, 2015; Kraus, Voon, & Potenza, 2016) ။ အများအပြားလေ့လာမှုများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်းပါးများအတွက်စွဲသုတေသန (စံ 2) မှမော်ဒယ်များယူဆချက်ရရှိရန်နှင့်ရလဒ်များကိုရှင်းပြဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည် (အမှတ်တံဆိပ်, Antons, Wegmann, & Potenza, 2019; အမှတ်တံဆိပ်, Wegmann, et al ။ , 2019; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, လူငယ်, et al ။ , 2016; Stark et al ။ , 2017; Wéry, Deleuze, Canale, & Billieux, 2018) ။ Self- အစီရင်ခံစာ၊ အမူအကျင့်၊ electrophysiological နှင့် neuroimaging လေ့လာမှုများမှအချက်အလက်များသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်လောင်းကစား / ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်အမျိုးမျိုးသောအတိုင်းအတာအထိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ တည်ဆောက်ထားသည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များနှင့်နောက်ခံအာရုံကြောဆက်စပ်မှုများပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကြိုတင်လေ့လာမှုများတွင်မှတ်သားထားသည့်အဖြစ်အပျက်များတွင် cue-reactivity နှင့်တလိုတလားရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများပါဝင်သော ဦး နှောက်rewardရိယာများတွင်လှုပ်ရှားမှုတိုးလာခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် (လှုံ့ဆော်မှု - တိကျသော) တားစီးထိန်းချုပ်မှု (ဥပမာ၊ Antons & အမှတ်တံဆိပ်, 2018; et al Antons, Mueller ။ , 2019; Antons, Trotzke, Wegmann, & Brand, 2019; နှစ်ဦးစလုံး et al ။ , 2019; ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Snagowski, Laier, & Maderwald, 2016; Gola et al ။ , 2017; Klucken, Wehrum-Osinsky, Schweckendiek, Kruse, & Stark, 2016; Kowalewska et al ။ , 2018; Mechelmans et al ။ , 2014; Stark, Klucken, Potenza, အမှတ်တံဆိပ်, & Strahler, 2018; Voon et al ။ , 2014).
အဆိုပြုထားသည့် meta-level စံသတ်မှတ်ချက်သုံးခုနှင့်အညီပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောသက်သေအထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းရောဂါသည် ICD-11 အမျိုးအစား“ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကြောင့်အခြားသတ်မှတ်ထားသောမမှန်မှုများ” ကိုအဓိကသုံးမျိုးပေါ် အခြေခံ၍ ရောဂါလက္ခဏာပြနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြင်ဆင်ခြင်းအမှတ်တံဆိပ်, Blycker, et al ။ , 2019) ။ တစ်ခု conditio sine qua non ဖြစ်သည် ဤအမျိုးအစားအတွင်းရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါအားထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတွက်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပါ ၀ င်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု (ယနေ့ခေတ်တွင်အများအားဖြင့်အွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ) ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းမှတစ် ဦး တည်းသီးသန့်နှင့်အထူးသဖြင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။Kraus et al ။ , 2018) ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဂိမ်းချို့ယွင်းမှုအတွက်လုပ်ဆောင်မှုချို့ယွင်းမှုနှင့်နေ့စဉ်ဘဝတွင်ဆိုးကျိုးများကြုံတွေ့ရမှသာလျှင်အပြုအမူကိုစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည် (Billieux et al ။ , 2017; ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO, 2019) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါအားလက်ရှိ ICD-11 ရောဂါလက္ခဏာပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာပြမှုရှိနိုင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပြုမိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပြာစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မကြာခဏလိုက်ပါလာသည့်လိင်အပြုအမူများ (အများဆုံးအာသာဖြေခြင်းဖြစ်သော်လည်းတွဲဖက်လိင်အပါအဝင်အခြားလိင်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်နိုင်သည်) compulsive လိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်စံတွေ့ဆုံရန် (Kraus & Sweeney, 2019) ။ compulsive လိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ၏ရောဂါလက္ခဏာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုကိုသာမက၊ အခြားညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်မသက်ဆိုင်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုပါခံစားနေရသောလူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သင့်တော်သည်။ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုရောဂါလက္ခဏာကိုအခြားသတ်မှတ်ထားသောရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်အများအားဖြင့်ညံ့ဖျင်းသောထိန်းချုပ်ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းမှခံစားနေရသူများအတွက် (လုံလောက်သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်တွဲဖက်ခြင်း) အတွက် ပို၍ လုံလောက်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်အသုံးဝင်သည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေလက်ရှိတွင်အငြင်းပွားလျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်း / အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းများအတွက်လည်းဖြစ်သည်။Király & Demetrovics, 2017).
28) လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပြOnlineနာရှိသောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေသုံးစွဲမှု၏စွဲလမ်းစေသောသဘောသဘာဝ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၂၀) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ရရှိနိုင်သည့်တွေ့ရှိချက်များအရ CSBD နှင့် POPU ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်စွဲလမ်းမှု၏လက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီပြီးအမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုများကိုပစ်မှတ်ထားရာတွင်အထောက်အကူပြုသောကြား ၀ င်မှုများသည် CSBD နှင့် POPU နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းအားထောက်ပံ့ရာတွင်လိုက်လျောညီထွေရှိရန်နှင့်အသုံးပြုရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ခိုင်လုံစေသည်။ CSBD သို့မဟုတ် POPU အတွက်ကုသမှုကျပန်းစမ်းသပ်မှုများမရှိသော်လည်း opioid ရန်သူ၊ သိမြင်မှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုထုံးနှင့်သတိ -based ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည်အချို့သောဖြစ်ရပ်များကို အခြေခံ၍ ကတိတော်များကိုပြသနေသည်။
POPU နှင့် CSBD ၏ neurobiology တွင်တည်ရှိပြီးသောဓာတုပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများ၊ အလားတူ neuropsychological ယန္တရားများနှင့် dopamine ဆုလာဘ်စနစ်တွင်ဘုံအာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူမျှဝေထားသော neuroanatomical ဆက်နွယ်မှုများပါ ၀ င်သည်။
အလွန်အကျွံအသုံးပြုသောပစ္စည်းများကိုထင်ဟပ်ပြခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်း၊ ချို့ယွင်းခြင်းနှင့်စိတ်သောကရောက်ခြင်းတို့အတွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
29) အလုပ်မဖြစ်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ - အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ လက်တွေ့အခြေအနေများ၊ neurobiological profile များနှင့်ကုသမှုများ (၂၀၂၀) - ကောက်နှုတ်ချက်:
၁။ အလွန်အမင်းအွန်လိုင်းတွင်၎င်းကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်သုံးသောလူငယ်များအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်မှုကျဆင်းခြင်းနှင့်အချို့သောကိစ္စများတွင်လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှုများ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ DOC နှင့် ADHD တို့နှင့်ဆက်စပ်သည်။ ။
၂။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများအကြားရှင်းလင်းပြတ်သားသော neurobiological ကွာခြားချက်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် ventral hypoactivity ရှိပါက၊ ၎င်းအစား erotic signal များနှင့်ဆုလာဘ်များအတွက် hytractivity မပါဘဲဆုလာဘ်များအတွက် ventral ဓာတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ဤအချက်က ၀ န်ထမ်းများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကိုယ်ထိလက်ရောက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ prefrontal cortex  ၏အဖြူကိစ္စကြီးမြတ်သောစနစ်တကျပြ။
၃။ စွဲလမ်းမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုမှ neurobiologically ကွဲပြားသော်လည်းအပြုအမူစွဲလမ်းမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလုပ်မဖြစ်သောလူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေပြီး neurobiological modification ကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေအလုပ်လုပ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုအာရုံမပျံ့လွင့်စေခြင်း၊ လှုံ့ဆော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, pituitary-hypothalamic-adrenal ဝင်ရိုးနှင့် prefrontal ဆားကစ်၏ hypofrontality ၏ဟော်မုန်းတန်ဖိုးများကိုထိခိုက်နိုင်စွမ်းစိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုသိသိသာသာအဆင့်  ။
၄။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုသည်သည်းခံမှုနိမ့်ကျမှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပမာဏနှင့်ဆက်စပ်သောဆုလာဘ်စနစ် (dorsal striatum) တွင်မီးခိုးရောင်အမှုန်များတွေ့ရှိမှုကို fMRI လေ့လာမှုမှအတည်ပြုခဲ့သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကိုခေတ္တကြည့်ရှုစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်ဆုလာဘ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်းသူတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သုတေသီများကသူတို့၏ရလဒ်များသည်တူညီသောနှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုရရှိရန်ပိုမိုစိတ်အားတက်ကြွစေရန်လိုအပ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်သည်းခံနိုင်ခြင်းကိုပြသခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ထို့အပြင်အနိမ့်အလားအလာ၏အချက်ပြမှုများကို porn- မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် Putamen တှငျတှေ့ရ 
၅။ လူတစ် ဦး ၏ထင်မြင်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ လိင်အရလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုသည်လိင်အလိုဆန္ဒမပြင်းထန်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဘာသာရေးတစ်ကိုယ်တော်လှုပ်ရှားမှုတွင်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသောကြောင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုကိုလည်းအားပေးသည်။ ထို့ကြောင့် porn ကိုပိုမိုတုံ့ပြန်မှုရှိသူများသည်တကယ့်လူတစ် ဦး နှင့်မျှဝေခြင်းထက်တစ် ဦး တည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
၆။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုရုတ်တရက်ရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်စိတ်ဓါတ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်နှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
၈။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာကွန်ယက်များသည်စွဲလမ်းမှုအပါအ ၀ င်အခြားဆုလာဘ်များထုတ်ယူရာတွင်ပါ ၀ င်သူများနှင့်ဆင်တူသည်။